စစေ့တှေ့ေး ရေးရေးပျေါ – My Blog
တီတီလေးရေ…တီတီလေး…လာပါအုံး…မွနျမွနျ…အား…အား….” အိပျခနျးထဲမှ ‘ မိုငျမိုငျ ’ ၏ အလနျ့တကွား အသံကွောငျ့ သီတာပွုံးလကျထဲမှ စာစောငျကိုခြ၍ ကမနျးကတနျးထ၍ ပွေးလာမိသညျ။ အိပျခနျးထဲလှမျးဝငျလိုကျတော့ မှနျရှမှေ့ာရပျနသေော မိုငျမိုငျ၏ ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးတှငျ ဘာအဝတျအစား မှမရှိ။ သူမကြောပွငျလေးကို မှနျဖကျသို့လှညျ့ကာ ကွညျ့၍နသေညျ။ “ မိုငျလေး….ဘာဖွဈလို့လဲဟငျ….” သီတာပွုံး အမောတကော မေးလိုကျမိသညျ။ “ သမီးအနာက တစဈစဈနဲ့ ကိုကျနတေယျ….တီတီလေး…” “ ဟငျ…ပွစမျး…” မိုငျမိုငျ့ညာဘကျလကျပွငျတှငျ မှေးကြှတျနာပေါကျနကွေောငျး သီတာပွုံး သိထားသညျ။
“ ဟယျ…အနာက ပွညျတှနေဲ့ မှညျ့နပွေီ သမီး…တီတီလေး ညှဈပေးမယျ….ဒီပွညျတှထှေကျသှားမှ ကိုကျတာသကျ သာပွီး အနာပြောကျသှားမှာ….” ပွောလဲပွော ပွညျတှနေဲ့စူတကျနသေော မှေးကြှတျနာ၏ ဘေးတဈဖကျတဈခကျြဆီသို့ လကျမနှဈဖကျကို တငျလိုကျ သညျ။ ပွီးတော့ ဆတျကနဲ ညှဈလိုကျသညျ။ “ အား….အမလေး….သပေါပွီ….အား…အား….” မိုငျမိုငျငယျသံပါအောငျ အျောလိုကျသညျ။ သီတာပွုံး လကျတှနျ့သှားသညျ။ မိုငျမိုငျကို ကွညျ့လိုကျတော့ မကျြရညျ တှေ ပိုးပိုးပေါကျပေါကျကလြာနသေညျ။ အနာကပှငျ့သှားပွီ ပွညျတှတေစှနျးတစထှကျနပွေီ နောကျထပျနှဈခကျြလောကျညှဈ လိုကျရငျ အထဲကပွညျပုတျတှရေော အမွဈပါထှကျသှားမညျဖွဈသညျ။ ဒါပမေယျ့ မိုငျမိုငျက ဘယျလိုမှ ခံနိုငျရညျမရှိတော့ပွီ။
“ မိုငျလေး….ရှကေို့ခါးလေးနညျးနညျးကိုငျးလိုကျ…” “ ဟငျ…တီတီလေး ထပျညှဈအုံးမလို့လား….သမီး မခံနိုငျတော့ဘူး…ဟငျ့…ဟငျ့….” “ မညှဈတော့ပါဘူး သမီးရဲ့…ရှကေို့နညျးနညျးကိုငျးလိုကျနျော….မိုငျလေး မနာစရေပါဘူး…” မိုငျမိုငျက သီတာပွုံးကို မရဲတရဲဖွငျ့ မကျြလုံးဝိုငျးကွီးမြားဖွငျ့ လှညျ့ကွညျ့ပွီး ခါးကိုရှသေို့ကိုငျးလိုကျသညျ။ သီတာပွုံး သူမ၏ နှုတျခမျးနှဈလှာကို အနာတှငျကပျ၍ အားကုနျစုပျထုတျလိုကျသညျ။ ပွညျပုတျသှေးပုတျတှကေ သီတာပွုံး ပါးစပျထဲ ပါ လာသညျ။ “ အ…အ…အဟငျး…တီတီလေးရယျ…” သီတာပွုံး ပွတငျးပေါကျဘေးသို့သှား၍ ပါးစပျထဲမှဟာတှကေို ထှေးထုတျပဈလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ မိုငျလေးကိုပွုံး၍ ကွညျ့လိုကျသညျ။ မိုငျမိုငျက မကျြရညျအဝဲသား မကျြလုံးလေးတှကေို မကျြတောငျတဖွတျဖွတျခပျရငျး သီတာပွုံးကို ကွညျ့ သညျ။
“ တီတီလေးရယျ…” မိုငျမိုငျ သီတာပွုံး၏ ခါးကိုဖကျကာ ရငျခှငျထဲသို့ ပွေးဝငျလိုကျလတေော့သညျ။ သီတာပွုံးက မိုငျမိုငျ၏ အဒျေါဖွဈသညျ။ သီတာပွုံးကို မိုငျမိုငျဖခငျ၏ ညီမက မှေးခဲ့တာဖွဈသညျ။ မိုငျမိုငျ၏ မိဘမြား တှငျ သားသမီးမထှနျးကား၍ သီတာပွုံးအား လေးနှဈသမီးအရှယျကပငျ ချေါယူ၍ မှေးစားခဲ့သညျ။ သီတာပွုံး (၅)တနျး ရောကျသောနှဈတှငျမှ မိုငျမိုငျကို မှေးဖှားခဲ့တာဖွဈသညျ။ မိုငျမိုငျက သီတာပွုံးလကျပျေါတှငျပငျ သားသမီးနှငျ့မခွား ကွီးပွငျး လာခဲ့ရတာဖွဈသညျ။ သီတာပွုံးကအခု အသကျ(၂၅)နှဈရှိပွီဖွဈပွီး မိုငျမိုငျက အသကျ(၁၅)နှဈ၊ (၁၀)တနျး ကြောငျးသူဖွဈ သညျ။ မိုငျမိုငျ၏ မိဘမြားက လှနျခဲ့သော (၃)နှဈကြျောလောကျကပငျ ပွညျပတှငျသှား၍ အလုပျလုပျနသေညျ။
မိုငျမိုငျက သီတာပွုံးကို မခှဲနိုငျသဖွငျ့ မိဘမြားနှငျ့ လိုကျမသှားခွငျးဖွဈသညျ။ လှနျခဲ့သောနှဈက သီတာပွုံး အိမျထောငျကသြဖွငျ့ မိုငျမိုငျ ၏ မိဘမြား တခေါကျပွနျလာခဲ့ရသညျ။ အပွနျတှငျ မိုငျမိုငျကို ပွညျပသို့လိုကျခဲ့ရနျချေါသျောလညျး မိုငျမိုငျက လိုကျမသှားခဲ့ ပေ။ အဓိကအကွောငျးရငျးကတော့ သီတာပွုံးကို မိုငျမိုငျ မခှဲနိုငျခွငျးပငျ ဖွဈသညျ။ သီတာပွုံး၏ ယောကျြား ‘ ဧရာ ’ က အငျဂငျြနီယာတဈယောကျဖွဈပွီး လှိုငျသာယာက စကျရုံတဈရုံတှငျ ကွီးကွပျရေးမှူးဖွဈသညျ။ တဈပတျမှ နှဈရကျသာ အိမျသို့ ပွနျလာရသညျ။ ဧရာကလညျး မိုငျမိုငျကို သီတာပွုံးကဲ့သို့ပငျ သားသမီးတဈယောကျလို သဘောထားသညျ။ မိုငျမိုငျ့မကျြနှာ အညိုမခံ လိုလသေေးမရှိအောငျ ထားသညျ။ အလိုလိုကျသညျ။
ယုတျစှအဆုံး တဈပတျမှ နှဈရကျထဲ အိမျမှာနရေတဲ့ ဧရာက သူပွနျရောကျတဲ့ရကျ မိုငျမိုငျက သီတာပွုံးကို သူမနှငျ့လာအိပျရနျပွောလြှငျပငျ ဧရာက ကွညျကွညျဖွူဖွူ ခှငျ့ပွုခဲ့သညျသာ ဖွဈသညျ။ ကလေးစိတျမပြောကျသေးသော မိုငျမိုငျ၏ ဒဏျကို ဧရာနှငျ့ သီတာပွုံးတို့ လငျမယားမှာ မိုငျမိုငျကို ခဈြတဲ့စိတျဖွငျ့ ခံခဲ့ရလသေညျ။ ‘ အဟငျ့ ’ ဆိုပွီး နှုတျခမျးလေးနှဈလှာဟကာ ကိုယျလုံးလေးတှနျ့သှားခိုကျ သီတာပွုံး၏ နို့အုံလေးက ဧရာ၏ ပါးစပျ ထဲသို့ လကျတဈလုံးလောကျ ပို၍ဝငျသှားသညျ။ သီတာပွုံး မတှနျ့လို့လညျး မနနေိုငျ၊ ကွညျ့ပါအုံး နို့အုံနုနုညကျညကျလေး ထိပျပိုငျးကို ပါးစပျထဲသှားထားပွီး နို့သီးခေါငျးအောကျခွကေ အနီရောငျအဝနျးအဝိုငျးလေးကို ဧရာလြှာကွီးက ဖိဖိပွီး ယကျနေ သညျ။ နို့အုံတဈခုလုံးတှငျ ဒီနရောက အကွောတှအေမြားဆုံးနရော နို့သီးခေါငျးလေးထကျပငျ ပိုပွီးအာရုံကွောတှမြေားကာ အရသာကိုပိုပွီး ပေးစှမျးနိုငျသညျ။ မကျြလုံးနှဈလုံးကို မဖှငျ့ဘဲ ဧရာ၏ အထိအတှအေ့ရသာတှကွေားတှငျ မိနျးမူးနရေငျးက သီတာပွုံးမှာ ဧရာ၏ ကြောပွငျကွီးကို သူမလကျဖဝါးနုနုလေးဖွငျ့ ပှတျသပျပေးနလေသေညျ။ သူတို့နှဈယောကျစလုံး ဘာအ ဝတျအစားမှမရှိဘဲ ဝတျလဈစလဈနှငျ့ ဖွဈသညျ။ ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျး နို့အုံနုနုညကျညကျလေးနှဈလုံးကို မကျမကျမောမော စို့ပေးနရေုံမက ဧရာ၏ လကျတဈဖကျက သီတာပွုံး၏ ပေါငျနှဈလုံးကွားထဲရောကျကာ တဖွေးဖွေး ဖောငျးဖောငျးပွီးတငျး တငျးလာသော စောကျပတျအုံလေးကို လကျဖဝါးထဲထညျ့ကာ ဆုတျနယျပှတျသပျ၍ နသေေးသညျ။ သီတာပွုံးက အမှေးသနျ သညျ။ ဒါကွောငျ့ တဈပတျလြှငျ တဈကွိမျ ရိတျလရှေိ့သညျ။
ပွနျထှကျလာသော အမှေးငုတျတိုလေးတှေ၏ စူးစူးရှရှလေးဖွဈ ၍နသေညျက ဧရာအဖို့ ကိုငျရတာပို၍ အရသာတှနေ့စေရာ ဖွဈနသေညျ။ ပွီးတော့ ဧရာ၏လကျက အကှဲကွောငျးလေးကို စမျးလိုကျသညျ။ စိုစိုစှတျစှတျလေး ဖွဈနသေညျ။ ဧရာ၏ လကျညှိုးထိပျက စောကျစလေ့ေးကို တို့ထိကလိလိုကျသညျ။ “ အ…ကို…” ‘ ကို ’ ဆိုတာကို သံရှညျလေးဆှဲရငျး ပေါငျကွားမှ ဧရာ၏လကျကို သူမ၏ပေါငျလေးနှဈလုံးဖွငျ့ ညှပျလိုကျမိသညျ။ ဧရာ လကျညှိုးထိပျက တှငျးဝအိအိပြော့ပြော့လေးကို ပှတျသပျကလိရငျး အထဲသို့ဖွေးဖွေးလေး ထိုးသှငျးလိုကျသညျ။ သူ့ ကြောကုနျးကို ပှတျသပျ၍နသေော သီတာပွုံး၏ လကျလေးက တဒင်ျဂရပျသှားပွီး ကြောကုနျးကို ဖိ၍ဖကျလိုကျသညျကို ခံစား လိုကျရသညျ။
လကျညှိုးကို အထဲသို့လကျနှဈဆဈခနျ့ သှငျးပွီးမှ လကျညှိုးထိပျကလေးကိုကှေးကာ အထဲမှအတှငျးသားလေး တှကေို ကလိသညျပှတျသညျ။ ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးကလညျး နို့အုံလေးကို ပါးစပျထဲထညျ့၍ စုပျထားခွငျးမပွုတော့ဘဲ နို့သီး ခေါငျးလေးတဈခုထဲကိုသာစုပျကာ လြှာထိပျဖွငျ့ ထိုးထိုးပွီးပေးသညျ။ အထဲမှ အရညျလေးတှေ သိသိသာသာကွီး ရှဲ၍ထှကျ ထှကျလာကွောငျး ဧရာ၏ လကျညှိုးလေးက သိနသေညျ။ သီတာပွုံးကလညျး စောစောတုနျးကလို အိနွေ်ဒမရတော့ခြေ။ လှုပျ လှုပျရှရှလေး ဖွဈလာသညျ။
“ ကို…ကို…တျောပွီကှာ…ကို့…လကျကွီးထုတျလိုကျတော့ကှာ…ဟငျး….ဟငျး….” သီတာပွုံး၏ စိတျတှေ အတျောကွီးထလာပွီဖွဈကွောငျး ဧရာ သိလိုကျသညျ။ စောကျဖုတျထဲသှငျးထားသော လကျညှိုးကိုအသာလေး ဆှဲထုတျပွီး သူ့မကျြနှာကိုလညျး နို့အုံလေးတှပေျေါမှ ခှာလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ သီတာပွုံး၏ ပါးလေး တဖကျကို ရှတျကနဲနအေောငျ နမျးလိုကျပွီး သီတာပွုံး၏ ဘေးသို့ လှဲခလြိုကျသညျ။ သီတာပွုံးမှာ ဧရာဖကျသို့ လှညျ့လိုကျပွီး ဧရာကို ဖကျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ဧရာ၏ အောကျပိုငျးကို တဈခကျြလှမျးကွညျ့လိုကျပွီးလြှငျ ဧရာ၏ နှုတျခမျးကို ဖိကပျ၍ စုပျ လိုကျသညျ။
ပွီးတော့ သီတာပွုံး၏ လကျဖဝါးလေးတဈဖကျက ဧရာ၏ ဝမျးဗိုကျပျေါရောကျသှားပွီး ခကျြအောကျဆီးစပျကို လြှောတိုကျ၍ ပှတျရငျး ဖွူလှသောသူမ၏ လကျခြောငျးလေးမြားက လမှေးတှကွေား တိုးဝငျသှားသညျ။ သူတို့နှဈယောကျ နှုတျခမျးခွငျးကလညျး ဂဟဆေကျနကွေသညျ။ သူမ၏ လကျက လမှေးတှကေို လုံးခလြေိုကျ ထိုးဖှလိုကျ ဆော့ကစားရငျး မတျတောငျနသေော သနျမာလှသညျ့ ဧရာ၏ လီးခြောငျးကွီးကို လကျခြောငျးလေးမြားဖွငျ့ ရဈပတျကာ ကိုငျလိုကျသညျ။ ပွီး တော့ တဈခကျြလောကျညှဈလိုကျပွီးနောကျ ဒဈကွီးကိုဖွဲခလြိုကျပွီး နကျရှိုငျးသောဒဈကွီးအကွားသို့ သူမ၏ လကျမထိပျ လေးက တိုးဝငျသှားကာ ဒဈကွီးပတျပတျလညျကို ကပျ၍ ပှတျလိုကျသညျ။
“ အ…ဟ…အငျး….သီတာ…အ…အ…ဟငျး….ဟငျး….” “ွပွတျ…” “ အဟငျး…သူ…သူမြားကို ကလိခငျြတိုငျး ကလိနတေော့ကောငျးတယျ…သူ့ကတြော့ တခကျြလေး လုပျလိုကျတာနဲ့ ….ဟှနျး…မပွောလိုကျခငျြဘူး….” နှုတျခမျးအစုံကို ဆှဲခှာရငျး မကျြစောငျးလှလှလေးထိုးကာ သီတာပွုံးက ပွောလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ သူမလကျတဈ ဖကျဖွငျ့ ဆုပျကိုငျထားသော ဧရာ၏ လီးကွီးကို ကွညျ့လိုကျသညျ။ အသဲယားလောကျအောငျ ဖောငျးကားနသေော ထိပျဖူး ကွီး၏ ထိပျအပေါကျလေးမှ အရညျကွညျလေးတှေ စို့ထှကျနကွေောငျး တှလေို့ကျရသညျ။ သီတာပွုံး၏ မကျြနှာလေးပွုံး ယောငျသနျးသှားပွီး သူမ၏ လကျလေးကို ဂှငျးလြှောလုပျကာ ထောငျမတျနသေော လီးကွီးကို စုနျကာဆနျကာ ဂှငျးတိုကျပေး သညျ။ လေးငါးကွိမျမြှ လုပျပေးလိုကျပွီးခြိနျတှငျပငျ ဧရာ၏ လီးကွီးက တဆဈဆဈဖွဈ၍လာသညျ။ သီတာပွုံးမှာ ဧရာ၏ ပါးကို ဖိကပျ၍ အားရပါးရတဈခကျြမြှ နမျးလိုကျပွီး ဧရာ၏ ခါးပျေါသို့ ခှတကျလိုကျသညျ။ သူမ၏ အသကျရှူသံတှကေ ပွငျးထနျနသေညျ။
ထို့နောကျ ကိုယျကိုမတျ၍ ဖငျကွီးကို မွှောကျလိုကျပွီး လကျတဈဖကျမှ ဆုတျကိုငျထားသော လီးကွီးကို စောကျပတျဝတှငျ တလေို့ကျပွီး ဖငျကွီးကို တဖွေးဖွေးခွငျးဖိ၍ခကြာ လီးကွီးကို သှငျးယူသညျ။ ဧရာ ပကျလကျလှနျလကျြမှ အသာလေးငွိမျနပွေီး သီတာပွုံးကို ကွညျ့နသေညျ။ ရမ်မကျစိတျတှေ ပွငျးပွနသေော မိနျးကလေးတဈယောကျက လီးကို စောကျပတျထဲသို့ သူမဘာသာ အာသာဆန်ဒပွငျးပွစှာဖွငျ့ သှငျးယူနပေုံမှာ မွငျရတာ အရသာရှိလှသညျ။ စောကျပတျဝသို့ လီး ထိပျဖူးကွီး တိုးဝငျသှားခြိနျမှာ သီတာပွုံး၏ ပါးစပျလေးဟ၍သှားသညျ။ သူမ၏ ဖငျကွီးက တဖွေးဖွေးဖိခသြဖွငျ့ လီးကွီးက ဒဈကွီးတဈခုလုံး ဝငျသှားခြိနျတှငျ သိတာပွုံး၏ မကျြတောငျကော့ကော့လေးတှေ စငျးကသြှားသညျ။ စောကျခေါငျးထဲသို့ လီး ကွီးတဈဝကျလောကျဝငျသှားတော့ သူမ၏ မကျြလုံးလေးတှကေ မှိတျထားပွီးဖွဈနသေညျ။
“ ဗွဈ…” “ ဖတျ…” စောကျခေါငျးထဲသို့ လီးကွီးတဆုံးဝငျရနျ လကျနှဈလုံးလောကျအလိုတှငျတော့ လီးကိုဖွေးဖွေးခငျြးသှငျးနရောမှ ဆတျကနဲဖိခကြာ တဆုံးသှငျးလိုကျရငျး သီတာပွုံးမှာ အောကျနှုတျခမျးလေးကို ကိုကျလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ သူမ၏ကိုယျကို ရှသေို့ငိုကျလိုကျပွီး ဧရာ၏ ရငျအုံထကျသို့ သူမ၏ လကျလေးနှဈဖကျက ထောကျပွီး သီတာပွုံးမှာ လီးကို စောကျခေါငျးထဲ သှငျးရငျး အတျောယားနပေုံရသညျ။
ခပျသှကျသှကျကွီး (၁၀)ခကျြမြှ ဆောငျ့၍ စိတျရှိလကျရှိ လိုးပဈလိုကျသညျ။ “ ဗွဈ…ဖှတျ…ဗွဈ…ပွှတျ…ဖတျ…ပလှတျ…ဗွဈ…ဗွဈ….” ပွီးတော့မှ သီတာပွုံးမှာ သူမ၏ ဖငျကွီးကို ကွှကွှပွီး တဈခကျြခငျြး ဆောငျ့၍လိုးသညျ။ ဧရာက သူမ၏ နို့နှဈလုံးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့လှမျး၍ဆှဲရငျး သီတာပွုံး ဆောငျ့အခတြှငျ အောကျမှနေ၍ သူ၏လီးကွီးကို ကော့၍ကော့၍ တငျပေးသညျ။ သူမ၏ စောကျခေါငျးထဲမှ အရညျကွညျတှကေ သိသိသာသာကွီး စီးကလြာပွီး ဧရာ၏ လမှေးအုံ တဈခုလုံး ရှဲနဈ၍နသေညျ။
သီတာပွုံးမှာ မကျြလုံးလေးတှကေို မဖှငျ့တော့ဘဲ အထိအတှအေ့ာရုံကိုသာ တစိုကျမတျမတျ ခံစားရငျး ခပျပွငျးပွငျးတခကျြ ခွငျး ဆောငျ့လိုကျ ခပျသှကျသှကျ ဆောငျ့လိုကျဖွငျ့ သူမစိတျတိုငျးကလြိုးနသေညျ။ “ ဗွဈ….ပလှတျ…ပလပျ…စှတျ…ဖှတျ….ဗွဈ…ဗွဈ….” လိုးဆောငျ့ရာ၌ တဈခကျြခွငျး ခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့လိုးသညျနှငျ့ ခပျသှကျသှကျကွီး ဆောငျ့လိုးတာမြိုးရှိသလို ဆောငျ့ ရာ၌လညျး ဆီးခုံခွငျးကပျ၍ ဆောငျ့တာနှငျ့ ခှာ၍ ဆောငျ့တာမြိုးလညျး ရှိလသေညျ။ မိနျးမတဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ အကွိုကျခွငျးမတူပေ။ ဘယျလိုဆောငျ့တာကွိုကျသလဲဆိုတာ သိလိုလြှငျ မိနျးကလေးဖွဈသူကို စညျးရုံး၍ အပျေါသို့တငျပေး လိုကျပါ။ သူတို့အကွိုကျ ဆောငျ့ပွပါလိမျ့မညျ။ သီတာပွုံးကတော့ တဈခကျြခွငျး မှနျမှနျဆောငျ့လိုကျ ခပျသှကျသှကျဆောငျ့လိုကျ လိုးတာကိုကွိုကျပုံရသညျ။
“ ဗွဈ…ပလှတျ…ပွှတျ….ဖှတျ…ဖှတျ….ပလှတျ….ဗွဈ…ဗွဈ…ဟငျး…ဟငျး….ဟငျး….” သီတာပွုံးမှာ အပျေါမှ စိတျကွိုကျဆောငျ့ရငျး ဆောငျ့ရငျး အောကျဖကျစောကျခေါငျးထဲမှ အရညျတှေ ရှဲနဈလာသလို သူမ၏ ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံး ဖှေးဖှေးလေးမှာလညျး တဈကိုယျလုံးခြှေးတှေ ပွနျလာသညျ။ ပွီးတော့ တဈခကျြဆောငျ့ လိုကျတိုငျး ဟငျးကနဲ ဟငျးကနဲ အသကျပွငျးပွငျးရှူသောအသံက ထှကျနသေညျ။ “ ဗွဈ…ဗွဈ…ပွှတျ…ဖှပျ…ဖှပျ….ဟငျး…ဟငျး….” “ွပွတျ…” “ ဘုနျး…ဟငျး…ဟငျး….ဟငျး….” အားရပါးရခပျသှကျသှကျကွီး အားရပါးရလေး ငါးခကျြမြှ ဆောငျ့လိုးလိုကျပွီးနောကျ ဗွုံးကနဲ သီတာပွုံးမှာ ဖငျကွီး ကိုကွှ၍ လီးကိုခြှတျလိုကျပွီး ဧရာ၏ ဘေးအိပျယာပျေါသို့ ‘ ဘုနျး ’ ကနဲ ပကျလကျလှနျလှဲခြ၍ မကျြလုံးအစုံကို မှိတျကာ တဟငျးဟငျး အသကျရှူသံတှေ ပွငျးထနျနသေညျ။ ဧရာက ပကျလကျလှဲနရောမှ ခါးတဆဈခြိုး ထထိုငျလိုကျပွီး စငျးထား သော သီတာပွုံး၏ ပေါငျနှဈခြောငျးကို ဆှဲထောငျလိုကျသညျ။ သူအပျေါမှ တလှညျ့တကျလုပျမညျပေါ့။ သီတာပွုံး ပေါငျနှဈ လုံးကို အတငျးစကေ့ပျထားသညျ။
“ နေ…နေ…နေ..အုံး..ကို….ခဏ…သီတာ ပွီးခငျြသလို ဖွဈနလေို့ ခဏနားတာ…အဟငျး…ဟငျး….” ပွီးခါနီး ခဏနား၍ အရသာကိုတာရှညျ ခံစားလိုသညျ့ သဘောပငျ… သီတာပွုံး၏ ရငျဘတျလေးက နိမျ့ခြီမွငျ့ခြီ ဖွဈ၍ နသေညျ။ ဧရာ သူမကို ငုံ၍ဖကျလိုကျပွီး ပါးပွငျလေးနှဈဖကျကို နမျး သညျ။ ပွီး နှုတျခမျးပါးလေးအစုံကို စုပျနမျးသညျ။ သီတာပွုံး၏ ကိုယျလုံးလေးတဈခုလုံး ပူနှေး၍ နသေညျ။ ဧရာက သူမ၏ နှုတျခမျးလေးမှသညျ လညျတိုငျ ဖှေးဖှေးလေးတှကေို စုပျနမျးသညျ။ ပွီးတော့ သီတာပွုံး၏ ပုခုံးလုံးလုံးလေးနှငျ့ ပွညျ့တငျး သော ရငျညှနျ့သားလေးမြား ထိုမှတဖနျ ပွညျ့ပွညျ့ဖွိုးဖွိုး နို့အုံလေးတှကေို စို့ပေးသညျ။ အတငျးစကေ့ပျထားသော သီတာပွုံး ၏ ပေါငျလုံးလေးနှဈလုံး တဖွေးဖွေးလြော့ကြ၍ ကငျးကှာလာသညျ။ နောကျနိမျ့ခြီမွငျ့ခြီဖွဈနသေော သူမ၏ ရငျဘတျလေးက တညျငွိမျလာပွီး ရငျဘတျလေးကို ကော့၍ ကော့၍ နို့စို့နသေော ဧရာ၏ ပါးစပျသို့ ကပျ၍ကပျ၍ ပေးသညျ။
“ ကို…” “ ပွှတျ…ဟငျ…” ဧရာ နို့ကိုပါးစပျမှ ခြှတျ၍ထူးသညျ။ “ လုပျကရြအောငျနျော….ကိုက နောကျကနလေုပျနျော….” သီတာပွုံး ကုနျးပေးတော့မညျကို ဧရာ သိလိုကျသညျ။ သီတာပွုံး၏ ကိုယျပျေါမှာမိုးထားသော သူ၏ ကိုယျအပျေါ ပိုငျးကို ဧရာဖယျပေးလိုကျတော့ သီတာပွုံးက ပကျလကျလှဲနရောမှ လကျလေးတဈဖကျထောကျ၍ ထထိုငျလိုကျသညျ။ ပွီး တော့ စောစောက သူမတကျလိုးထားသဖွငျ့ အရညျမြားဖွငျ့ ရှဲစိုလကျြ ထောငျမတျနသေော ဧရာ၏ လီးကွီးကို မကျမောတပျ မကျစှာဖွငျ့ ကွညျ့လိုကျပွီး လကျဖြားလေးဖွငျ့ လှမျး၍ ထကိုငျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ မကျြလုံးလေးပုတျခတျပုတျခတျ လုပျ လိုကျပွီး အိပျယာပျေါမှာပငျ ဒူးထောကျ၍ လေးဖကျထောကျလိုကျသညျ။
ဧရာက သီတာပွုံး၏ နောကျဖကျသို့ ဝငျလိုကျပွီး ဒူး ထောကျလိုကျပွီးခြိနျတှငျ သီတာပွုံးက ရှဖေ့ကျမှဆနျ့၍ ထောကျထားသော သူမ၏လကျနှဈဖကျကို ကှေး၍ခလြိုကျပွီး ဒ တောငျဆဈနှငျ့ထောကျကာ နဖူးကို အိပျယာနှငျ့ထိ၍ ဝပျနလေိုကျရာ ဖငျဘူးတောငျးထောငျပေးထားသညျ့ပုံ ဖွဈသှားသညျ။ နဂိုထဲက တငျသားတှလေုံးတဈ ကားစှငျ့သော သီတာပွုံး၏ ဖငျသားဖှေးဖှေးကွီးမြားမှာ ယခုလို ဖငျဘူးတောငျးထောငျလိုကျ တော့ အလှနျပငျ မကျမောစရာ ကောငျးလှသညျ။ ပွီးတော့ ဖငျသားကွီး နှဈလုံးကွားမှ အောကျသို့စူထှကျနသေော စောကျ ဖုတျကွီးမှာ စောစောက လိုးထားသော အရှိနျနှငျ့ နှုတျခမျးသားကွီးမြားမှာ နီရဲဖောငျးတငျးနပွေီး အရညျတို့က ရှဲ၍နသေညျ။ နောကျမှကွညျ့ရငျး ဧရာ၏ လီးကွီးက တဆတျဆတျ ဖွဈလာသညျ။ ဧရာက သီတာပွုံး၏ ခါးလေးကို လှမျးကိုငျ၍ ရှကေို့ ကပျကာ တဆတျဆတျဖွဈနသေော လီးထိပျကွီးကို စောကျဖုတျဝသို့ တလေို့ကျရာ သီတာပွုံးက ဒူးထောကျထားသော သူမ ၏ ပေါငျနှဈဖကျကို အသာလေးခြဲပေးလိုကျသညျ။
“ ဗွဈ….ဒုတျ….အ…ဟား….” စိတျမထိနျးနိုငျဖွဈလာသော ဧရာက လီးကို တခကျြတညျးနှငျ့ ဆောငျ့သှငျးလိုကျသညျ။ သီတာပွုံး၏ ခေါငျးလေး ထောငျ၍ သှားသညျ။ လီးကတဆုံးဝငျသှားပွီး သီတာပွုံး စောစောကအတနျငယျဟပေးလိုကျသော ဒူးထောကျထားသော ပေါငျနှဈဖကျကို ပွနျ၍ စလေို့ကျသညျ။ “ ကို…” “ ဟငျ…” “ တခါထဲသာ ပွီးအောငျလုပျလိုကျတော့ကှာနျော….” “ အငျး….” ဧရာ စောကျခေါငျးထဲသို့ တဆုံးဝငျနသေော လီးကို ဆှဲဆှဲထုတျပွီး တခကျြခွငျး ခပျပွငျးပွငျး ဆောငျ့လိုးသညျ။ ပွီး တော့တဖနျ ခပျသှကျသှကျ ဆောငျ့လိုးပွနျသညျ။ “ ဗွဈ…ပလှတျ…အငျ့….အငျ့…ပလှတျ….ဗွဈ….ဗွဈ…အငျ့….အငျး…..” သီတာပွုံးကွိုကျသော ဆောငျ့နညျးအတိုငျး တခကျြခွငျး ခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့လိုကျ၊ ခပျသှကျသှကျဆောငျ့လိုကျဖွငျ့ ဆောငျ့လိုးရငျး ဖငျဘူးတောငျးထောငျထားသော သီတာပွုံး၏ ခန်ဓာကိုယျအောကျဖကျမှ နို့နှဈလုံးကို လှမျး၍ဆှဲရငျး ဆောငျ့ လိုးသညျ။
“ ဗွဈ…ပွှတျ…ဖှတျ….ပလှတျ….ဖှတျ….ဗွဈ….” “ အငျ့….အငျ့….အငျး…အငျ့…..” သီတာပွုံးကလညျး ဖငျဘူးတောငျးထောငျထားသော သူမ၏ ဖငျကွီးကို နောကျသို့ဆောငျ့ဆောငျ့ပေးသညျ။ အိပျယာ ပျေါသို့ နဖူးလေးတိုကျ၍ထားသော သီတာပွုံး၏ ဦးခေါငျးလေးမှာ ခံစားရခကျပုံဖွငျ့ ဘယျညာခါယမျးနသေညျ။ “ ဗွဈ…ဗွဈ….ဖှတျ…ဗွဈ….အငျ့…အငျ့…အငျ့ဟငျ့…လုပျလုပျ….ကို…ခပျနာနာလေး….လုပျ….ပွီး…ပွီး…တော့မယျ. ….” ဧရာ သူမ၏ ခါးလေးကိုပွနျ၍ ကိုငျလိုကျပွီး အားကုနျဆောငျ့၍ ခပျသှကျသှကျကွီး လိုးတော့သညျ။ “ ဗွဈ…ပွှတျ…အား…ဖတျ…ဗွဈ….ဗွဈ….ပလှတျ…အား….ကို…ကို…အမလေး….ကိုရယျ….အား….အ….” ဖငျဘူးတောငျးထောငျထားသော သီတာပွုံး၏ ခါးလေးမှာ ဗွုံးကနဲကုနျးထလာပွီး ဖငျကွီးမှာ ခါယမျးသှားသညျ။ ဧရာ က သီတာပွုံး၏ ဖငျကွီးကို တညျငွိမျအောငျ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ကိုငျလိုကျပွီး သူ၏ လီးကွီးကို အတငျးဆောငျ့၍ ထိုးထညျ့ကာ သုတျရညျမြားကို ပနျးထညျ့လိုကျလသေညျ။ ပွီးတော့ တဖွေးဖွေး အိပျယာပျေါသို့မှောကျ၍ ကသြှားသော သီတာပွုံး၏ ကိုယျ ပျေါသို့ ဧရာမှာ မှောကျလကျြသားပါသှားလတေော့သညျ။
“ ဘုတျ…” မကျြလုံးမှိတျ၍ အမောဖွနေသေော သီတာပွုံး၏ မကျြလုံးလေးမြား ဖှငျ့လာသညျ။ တဖကျမှ မိုငျမိုငျ၏ အခနျးထဲမှ အသံတသံကွားလိုကျရသညျ။ သီတာပွုံးတို့ အိပျသညျ့ ကုတငျကွီးက တဖကျခနျးနှငျ့ခွား၍ ကာထားသော နံရံဘေးတှငျကပျ ၍ ထားခွငျးဖွဈသညျ။ မိုငျမိုငျမြား သူတို့ကို ခြောငျးကွညျ့နတောလားဟူသော အတှေးက သီတာပွုံးကို ခေါငျးနပမျးကွီးသှား စတေော့သညျ။ မနကျစောစောတှငျ ‘ ဧရာ ’ စကျရုံသို့ ပွနျသှားရနျရှိသဖွငျ့ သီတာပွုံးတဈယောကျ အလုပျရှုပျနသေညျ။ မိုငျမိုငျတဈ ယောကျ အိပျယာမှ ထပွီလား မထသေးဘူးလား ဆိုတာကို သတိမထားမိပေ။
ဧရာ ထှကျသှားပွီးတော့ သီတာပွုံးမှာ မိုငျမိုငျ ၏ အိပျခနျးရှသေို့ ရောကျလာရသညျ။ အခြိနျက မနကျ (၈) နာရီထိုးခါနီးပွီဖွဈသညျ။ သီတာပွုံး အိပျခနျးတံခါးကို တှနျးဖှငျ့ လိုကျတော့ တံခါးက အလှယျတကူ ပှငျ့၍သှားသညျ။ အိပျခနျးထဲရှိ စားပှဲတှငျ မိုငျမိုငျ ထိုငျ၍ငေါငျနသေညျကို သီတာပွုံး ဗွုံးကနဲ တှလေို့ကျရသညျ။ တံခါးဖှငျ့သံကွား၍ မိုငျမိုငျက လှညျ့ကွညျ့သညျ။
“ ဟငျ….တီတီလေးပါလား….” “ မိုငျမိုငျ….သမီး…ကြူရှငျမသှားသေးဘူးလား….” “ ဟငျ့အငျး….” သီတာပွုံးတို့မှာ စမျးခြောငျးတှငျနေ၍ မိုငျမိုငျ တကျရသောကြူရှငျမှာ တဈလမျးကြျောတှငျရှိသဖွငျ့ လမျးလြှောကျ၍ သှားလို့ရသညျ။ ကြူရှငျက မနကျ (၈) နာရီ တကျရတာကို သီတာပွုံး သိသညျ။ “ ဘာဖွဈလို့လဲ….သမီးရဲ့….သမီး နမေကောငျးဘူးလား….” “ မဟုတျဘူး….တီတီလေး….ဒီနကေ့ ဟောပွောပှဲ ကြူရှငျမှာရှိတယျ….မနကျဖွနျ ကြူရှငျ စာမေးပှဲရှိတယျ….အဲဒါ မိုငျမိုငျ မသှားတော့ဘဲ…အိမျမှာပဲ စာကကျြတော့မလို့….” “ အငျး…အငျး…မိုငျမိုငျဘာသာ ကွညျ့လုပျပေါ့….နမေကောငျးရငျတော့ တီတီလေးကို ပွောနျော….” “ အငျးပါ….” အိပျခနျးတံခါးကို ပွနျစေ့၍ သီတာပွုံး လှညျ့ထှကျလာခဲ့သညျ။ သူမထငျလို့ပဲလားမသိ မိုငျမိုငျတဈယောကျ ခပျငေါငျ ငေါငျဖွဈနသေညျဟု ထငျမိသညျ။ မဟုတျပါစနေဲ့လို့ သီတာပွုံး ဆုတောငျးမိလိုကျလသေညျ။
သီတာပွုံးမှာ မိုငျမိုငျ၏ အိပျခနျးရှမှေ့ပွနျ၍ လှညျ့ထှကျလာပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲ၍ ရခြေိုးလိုကျသညျ။ ရခြေိုး ပွီး ဖီးလိမျးပွငျဆငျပွီးသညျအထိ မိုငျမိုငျ အသံကို မကွားရတိတျဆိတျ၍ နသေညျ။ ဒါကွောငျ့ သီတာပွုံး မိုငျမိုငျ၏ အိပျခနျး ရှရေ့ောကျလာပွီး အိပျခနျးတံခါးကို အသာလေးဟ၍ အထဲသို့ ကွညျ့လိုကျသညျ။ “ အို…” ကုတငျပျေါတှငျ မိုငျမိုငျလေး စောစောကဝတျထားသော ထဘီလေးက ခါးတှငျမရှိတော့ ဖငျပွောငျလေးနှငျ့ ပေါငျနှဈ လုံးထောငျ၍ကားထားပွီး လကျနှဈဖကျကို ပေါငျကွားထဲသို့ထညျ့ကာ တဈဖကျက စောကျပတျနှုတျခမျးသားနှဈခုကိုဖွဲပွီး တဈ ဖကျက စောကျစလေ့ေးကို ကလိ၍နသေညျ။ မိုငျမိုငျ၏ မကျြနှာနုနုလေးက နီရဲ၍နပွေီး မကျြလုံးအစုံကိုမှိတျထားကာ မဲ့မဲ့ရှုံ့ရှုံ့ လေးဖွဈသှားလိုကျ လြှာလေးထုတျ၍ နှုတျခမျးလေးကို ပှတျလိုကျဖွငျ့ ဖွဈနသေညျ။ သီတာပွုံး ဘာလုပျရမညျကို အလငျြအ မွနျစဉျးစားလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ မိုငျမိုငျ၏ အိပျခနျးတံခါးကို တှနျးဖှငျ့ပွီးအထဲသို့ ဝငျလိုကျသညျ။
“ ဟငျ…တီတီလေး….” သီတာပွုံးကို တှလေို့ကျရသညျနှငျ့ မိုငျမိုငျ တဈကိုယျလုံးတုနျ၍ လနျ့သှားပွီး ပေါငျလေးထဲမှ လကျတှကေိုထုတျကာ ပေါငျနှဈလုံးကို စထေ့ားလိုကျသညျ။ ကုတငျဘေးတှငျရပျ၍ သီတာပွုံးက မိုငျမိုငျကို ကွညျ့ရငျး ပွုံးပွလိုကျသညျ။ “ ကိုယျ့တီတီလေးပဲ မိုငျမိုငျရယျ….ဘာလနျ့စရာလိုလို့လဲ…မိုငျမိုငျ ဘာဖွဈနတေယျဆိုတာ တီတီလေးက သိလို့ မိုငျမိုငျကို ဒီထကျကောငျးအောငျ လုပျပေးဖို့ ဝငျလာတာ….” “ ဟို…တီတီလေး…ဟို…ဟို….” “ ဟငျး…ဟငျး….ကဲပါ မိုငျမိုငျရယျ… သမီးရဲ့အဝတျအစားတှေ အကုနျလုံးကို ခြှတျလိုကျ…ကဲထ….” မိုငျမိုငျ မယုံရဲယုံရဲဖွငျ့ လေးပငျစှာ ထထိုငျပွီး သူမကိုယျပျေါမှ အကငြ်္ီတှေ ဘရာစီယာတှကေို ခြှတျလိုကျသညျ။ တငျး ရငျးနသေော မိုငျမိုငျ၏ နို့လေးတှကေ နုညကျနရေုံမြှမက သီတာပွုံး၏ နို့အုံတှလေောကျကို ဖှံ့ထှားသညျ။
“ ကဲ….လှဲလိုကျ မိုငျမိုငျ….” မိုငျမိုငျ မယုံရဲယုံရဲဖွငျ့ အိပျယာပျေါသို့ ပွနျ၍ လှဲခလြိုကျသညျ။ သီတာပွုံး ကုတငျပျေါသို့ တကျလိုကျပွီး မိုငျမိုငျဘေး တှငျ လှဲခလြိုကျသညျ။ ပွီးတော့ မိုငျမိုငျကိုယျလုံးလေးကို တငျးကွပျစှာဖကျပွီး မိုငျမိုငျမကျြနှာလေးကို ကမူးရှူးတိုး နမျးပေး သညျ။ ပွီးတော့ မိုငျမိုငျ၏ နှုတျခမျးလေးတှကေို စုပျနမျးလိုကျပွီး သူမ၏လကျက မိုငျမိုငျ၏ တဈကိုယျလုံးကို စုနျခြီဆနျခြီ ပှတျ သပျ၍ပေးသညျ။ မိုငျမိုငျတဈကိုယျလုံး ဖိနျးရှိနျး၍ လထေဲမွောကျတကျနသေလို ခံစားနရေသညျ။ အတနျငယျကွာတော့မှ သီတာပွုံးက မိုငျမိုငျ၏ နှုတျခမျးလေးတှကေို လှတျပေးလိုကျပွီး မိုငျမိုငျ၏ ပုခုံးလေးတှေ ရငျညှနျ့သားလေးတှကေို စုပျနမျး သညျ။
သီတာပွုံး လှတျပေးလိုကျသော မိုငျမိုငျ၏ နှုတျခမျးသားလေးတှကေ ထူအမျးအမျးဖွဈကာ တမြိုးလေးခံစားနရေသညျ။ သီတာပွုံး မိုငျမိုငျ၏ နို့အုံလေးတဈဖကျကို ငုံ၍စို့လိုကျပွီး ကနျြတဈဖကျကို လကျဖွငျ့ ကိုငျလိုကျသညျ။ မိုငျမိုငျ၏ လကျလေး တှကေ သီတာပွုံး၏ ကိုယျလုံးကွီးကို သိမျးကွုံး၍ ဖကျလိုကျသညျ။ သီတာပွုံးက မိုငျမိုငျ၏ နို့အုံထိပျပိုငျးလေးတှကေို အမိအ ရ စုပျထားပွီး လြှာဖြားက နို့သီးခေါငျးသေးသေးလေးနှငျ့တကှ နို့သီးခေါငျးအောကျခွမှေ အနီရောငျအဝိုငျးလေးကိုပါ တိုးတိုး ပွီးယကျပေးသညျ။ ထို့ပွငျ လကျတဈဖွငျ့ ကိုငျထားသော နို့အုံလေးကိုလညျး ဖှဖှလေးဆုပျနယျရငျး နို့သီးခေါငျးလေးကို လကျ ညှိုးလကျမဖွငျ့ ညှပျ၍ခပြေေးသညျ။
“ ဟငျး….ဟငျး…အငျး…ဟငျ့….တီတီ….တီတီလေးရယျ….ဟငျး….ဟငျး….” ခဏအတှငျး မိုငျမိုငျမှာ အဖြားတကျသလို တုနျယငျ၍လာသညျ။ သီတာပွုံး မိုငျမိုငျ၏ နို့အုံလေးတဈဖကျပျေါမှ လကျ ကိုဖယျလိုကျပွီး မိုငျမိုငျ၏ ဝမျးပွငျးသားလေးမြား ဆီးခုံနှငျ့ အမှေးပါးပါးလေးတှပေေါကျနသေော စောကျပတျအုံလေးတို့ကို ပှတျပေးသညျ။ မိုငျမိုငျ တဟငျးဟငျးနှငျ့ ညညျးရငျး ခံရခကျပုံဖွငျ့ သူမ၏ ပေါငျလေးမွှောကျလိုကျခလြိုကျ၊ စုလိုကျခှာလိုကျ ဖွဈနသေညျ။ သီတာပွုံးက နို့နှဈလုံးကို ဘယျပွနျညာပွနျ မပွတျအောငျ စို့ပေးရငျး လကျတဈဖကျက မိုငျမိုငျ၏ စောကျပတျအုံ လေးကို ပှတျပေးနရောမှ စောကျပတျနှုတျခမျးသားနှဈခုကို ပှတျပေးရငျး စောကျစလေ့ေးကို လကျမထိပျလေးဖွငျ့ တို့ထိကလိ ပေးလိုကျသညျ။
“ အဟငျး…ကြှတျ…ကြှတျ….အငျ့….ဟငျး….ဟငျး….” မိုငျမိုငျ၏ မကျြလုံးအစုံမှိတျထားသော မကျြနှာလေးမှာ ရှုံ့မဲ့၍နသေညျ။ ပွီးတော့နရေထိုငျရတာ အတျောခကျလာ သဖွငျ့ ဒူးနှဈဖကျကို ဆှဲထောငျပွီး ပေါငျနှဈဖကျကို ကားလိုကျမိသညျ။ ဒီမှာတငျ သီတာပွုံး၏ လကျခလယျက မိုငျမိုငျ၏ စောကျခေါငျးထဲသို့ ညငျသာစှာ တိုးဝငျလာသညျ။ “ အို….အိုး….အငျး….အငျး….” မိုငျမိုငျ ခါးလေးကော့တကျသှားသညျ။ စောကျခေါငျးထဲတှငျ အရညျတှကေ အတျောလေးရှဲနဈနပွေီ။ သီတာပွုံး နို့သီး လေးတှကေို ခပျပွငျးပွငျးစို့ပေးရငျး မိုငျမိုငျ၏ စောကျခေါငျးထဲမှ လကျခလယျကို သှငျးခြီထုတျခြီလုပျပေးသညျ။
လကျမက လညျး စောကျစလေ့ေးကို ပှတျသပျပေးသညျ။ မိုငျမိုငျ အရညျတှေ မတရားကွီး ထှကျလာခပြွေီ။ “ ဗွဈ… ဗွဈ….ပွှတျ….ပလှတျ….အိုး….အငျး….ဟငျး….အငျး….အိုး….အိုး….” မိုငျမိုငျ၏ စောကျခေါငျးထဲမှ သီတာပွုံး၏ ထုတျခြီသှငျးခြီလုပျပေးနသေော လကျခလယျလကျခြောငျးကို ဆှဲဆှဲပွီးစုပျ နသေညျ။ သီတာပွုံး မိုငျမိုငျ၏ နို့လေးကို ခပျပွငျးပွငျးစုပျ၍စို့ရငျး စောကျခေါငျးထဲမှ သူမ၏ လကျခလယျလကျခြောငျးကို သှကျသှကျကွီး အသှငျးအထုတျ လုပျပေးလိုကျသညျ။
“ အား…အငျး….အငျး….အား….အား….” မိုငျမိုငျ၏ တငျပါးလေးတှေ ဆကျကနဲ မွောကျကွှသှားပွီး တဈကိုယျလုံးတောငျ့သှားရာမှ တှနျ့ကနဲ တှနျ့ကနဲဖွဈကာ ငွိမျကသြှားသညျ။ စောကျခေါငျးထဲမှ လကျခလယျကို ခဏကွာသညျအထိ သှငျးလိုကျထုတျလိုကျ ဖွေးဖွေးခငျြးလုပျပေးပွီး တော့မှ လကျခလယျကို စောကျခေါငျးထဲမှဆှဲ၍ ထုတျလိုကျသညျ။ မိုငျမိုငျ မကျြလုံးလေးတှကေိုဖှငျ့၍ သီတာပွုံးအား ကြေးဇူး တငျသော အကွညျ့ဖွငျ့ကွညျ့သညျ။ “ မိုငျမိုငျ…ကောငျးတယျ မဟုတျလား….” “ အာ…တီတီလေး ကလဲ….” “ နောကျဆို မိုငျမိုငျ ကောငျးအောငျ တီတီလေး အမွဲလုပျပေးမယျ…ဘယျယောကျြားကိုမှ စိတျမဝငျစားရဘူးနျော… အန်တရာယျမြားတယျ သိလား….”
“ သိပါတယျ….တီတီလေး ကလဲ….” သီတာပွုံး ကနြေပျစှာ ပွုံးလိုကျမိသညျ။ နောကျနမြေ့ားတှငျ သီတာပွုံးက မိုငျမိုငျအား နတေို့ငျး နူးနှပျ၍ ပလူးပေး သညျ။ သုံးရကျမွောကျသောနအေ့ရောကျတှငျတော့ ယောကျြားနှငျ့မတှတေ့ာ သုံးရကျရှိသှားပွီဖွဈသော သီတာပွုံးက မိုငျမိုငျ အား သူမလုပျပေးသလို လုပျစေ၍ အာသာဖွခေဲ့သညျ။ သူတို့နှဈယောကျမှာ တဈပတျအကွာ ဧရာ အိမျသို့ပွနျလာသညျ့နေ့ အထိ နှဈယောကျသား တဈယောကျတလဲ ပလူးနခေဲ့ကွလသေညျ။
တဈပတျလုံးလုံး အလုပျထဲတှငျနခေဲ့ပွီး နားရကျတှငျ အိမျသို့ပွနျရောကျလြှငျ အိမျပေါကျဝ၌ မိနျးမဖွဈသူကို တှေ့ လိုကျရသညျနှငျ့ ဧရာ၏ လီးက တောငျလာတော့သညျ။ ဒီတဈပတျနားရကျ အိမျသို့ ဧရာပွနျရောကျလာတော့ မိုငျမိုငျတဈ ယောကျ အခြိုးတဈမြိုးပွောငျးနတောကို ဧရာ သတိထားမိသညျ။ မနကျပိုငျး ဧရာ အိမျသို့ရောကျရောကျခွငျး မိုငျမိုငျက သူမ၏ အိပျခနျးထဲမှနေ၍ “ တီတီလေးနျော….ဒီည မိုငျမိုငျနဲ့ လာအိပျရမှာ….” ဟု အျောပွောသံ ကွားလိုကျရသညျ။ ဧရာရော သီတာပွုံးပါ မကျြနှာကှကျကနဲ ပကျြသှားကွသညျ။ ခဏနမှေ သီတာပွုံးက “ အရငျလိုပဲ (၁၂) နာရီထိုးရငျ ကိုက သီတာကို လာနှိုးပေါ့…” ဟု ဧရာ၏ နားသို့ကပျ၍ တီးတိုးပွောသညျ။
နလေ့ညျဖကျကတြော့လညျး ကွညျ့အုံး…။ ဧရာတဈယောကျ မိုငျမိုငျ၏ အိပျခနျးရှမှေ့ ဖွတျ၍အသှား အိပျခနျးထဲမှ မိုငျမိုငျနှငျ့ ပကျပငျးတိုးခိုကျ မိုငျမိုငျ၏ ကိုယျပျေါတှငျ ရငျလြားထားသော ထဘီ က သူ့အလိုအလြှောကျပဲ ကြှတျသှားသလား ဒါမှမဟုတျ မိုငျမိုငျကပဲ ဖွုတျခလြိုကျသလား ဧရာ မတှလေို့ကျ။ ဧရာ တှလေို့ကျ ရတာကတော့ ထဘီစတဈဖကျကို လကျမှဆှဲထားသော မိုငျမိုငျ၏ ကိုယျလုံးတီး အလှပငျဖွဈသညျ။ ပွီးတော့ မိုငျမိုငျက “ ကနျ တော့…ကနျတော့…” ဟုပွောပွီး အိပျခနျးထဲ ပွနျဝငျသှားသညျ။
ဟော…ညနစောစားကွတုနျးကလညျး ကွညျ့အုံး…။ သုံးယောကျသား ထမငျးစားနကွေရငျး မိုငျမိုငျက သူမ၏ မကျြ လုံးရှဲကွီးမြားဖွငျ့ ဧရာ့ကို ရှမျးရှမျးစားစားကွညျ့လိုကျ မကျြလှာလေးပွနျခပြွီး ထမငျးကိုငုံ့စားလိုကျ တဈခြိနျလုံးလုပျနသေညျ။ ဧရာ မသိမသာဖွငျ့ သီတာပွုံးကို လှမျးပွီးအကဲခတျလိုကျတော့ ထမငျးကိုငုံ့စားနသေော သီတာပွုံး၏ မကျြနှာလေးမှာ နီရဲနေ သညျ။ သီတာပွုံးက မသိခငျြယောငျဆောငျနမှေနျး သိသာလှသညျ။ အသကျအရှယျနှငျ့ အတှအေ့ကွုံအရ မိုငျမိုငျတဈ ယောကျ ထမငျးစားရငျး အရညျလေးတှစေို့နပွေီဖွဈကွောငျး ဧရာ အတတျသိလသေညျ။
ခါတိုငျးဆိုလြှငျ ဧရာပွနျရောကျသညျ့နတှေ့ငျ မိုးမခြုပျမှီတှငျပငျ သီတာပွုံးကို တဈခြီကဈပွီးတတျသညျ။ အခုတော့ မိုငျမိုငျက တဈခြိနျလုံးအိမျတှငျရှိနေ၍ မကဈဖွဈတော့ပေ။ ညရောကျတော့ ဧရာ ပိုဆိုးသညျ။ ဘယျလိုမှ အိပျလို့မရ လီးက တဈခြိနျလုံးတောငျနသေညျ။ ပိုပွီးဆိုးတာက နခေ့ငျးကတှလေို့ကျရသော မိုငျမိုငျ၏ ပြိုမွဈနုနယျသော ကိုယျလုံးတီးအလှက သူ့ကို စိုးမိုး၍နသေညျ။ ည (၁၂) နာရီ ထိုးနိုငျခဲလှရောဟု ဧရာ တှေးမိသညျ။ ပုဆိုးကိုလှနျ၍ မနနေိုငျမထိုငျနိုငျဖွဈနသေော လီးကို လကျဖွငျ့ပှတျရငျး သူ့ဆန်ဒတှစေိတျတှကေ ပိုပိုပွီး ကာမဆန်ဒတှပွေငျးပွလာသညျ။ ဧရာ၏ ကာမဆန်ဒတှကေ ဘယျ လောကျထိပွငျးပွလာသလဲဆိုလြှငျ ဂှငျးတိုကျပဈလိုကျရငျ ကောငျးမလားဟု တှေးမိသညျအထိပငျဖွဈသညျ။ နောကျဆုံး တော့ ဧရာတဈယောကျ ခကျခဲစှာဖွငျ့ အခြိနျကာလကို ကြျောဖွတျရငျး ည (၁၂) နာရီက ထိုးသှားသညျ။ ကမနျးကတနျး ဧရာ ကုတငျပျေါမှ ခုနျဆငျးပွီး အိပျခနျးထဲမှထှကျရနျ သူ၏ အိပျခနျးတံခါးကို ဆှဲဖှငျ့လိုကျသညျ။
“ ဟငျ…” အိပျခနျးဝတှငျ ဘှားကနဲ မိုငျမိုငျကို ဧရာ မထငျမှတျဘဲ တှလေို့ကျရသညျ။ ခပျတှတှေလေေးရပျနသေော မိုငျမိုငျ၏ ကိုယျပျေါတှငျ ပုခုံးကွိုးသိုငျးပေါငျလညျလောကျသာရှိသော ဂါဝနျပါးပါးလေးတဈထညျသာရှိသညျ။ အိပျခနျးထဲမှ ထှကျလာ သော အလငျးရောငျဖွငျ့ မိုငျမိုငျ၏ ကိုယျပျေါမှ ရှိုကျဖိုကွီးငယျအသှယျသှယျကို အတိုငျးသားမွငျနရေသညျ။ ဧရာ မကျမောစှာ ဖွငျ့ ကွညျ့နလေိုကျမိသညျ။ ခဏတာ ခေါငျးလေးငုံ့နရောမှ မိုငျမိုငျ၏ မကျြနှာလေးက မော့၍လာသညျ။ မိုငျမိုငျ ဧရာကို လုံးဝ မကွညျ့ အခနျးဝတှငျ ရပျနသေော ဧရာကိုကြျော၍ အိပျခနျးထဲတှငျရှိနသေော ဧရာနှငျ့ သီတာပွုံးတို့ အိပျသညျ့ နှဈယောကျ အိပျကုတငျကွီးပျေါမှ ထူထဲလှသော နှဈယောကျအိပျမှယေ့ာကွီးကို လှမျး၍ကွညျ့သညျ။
ဧရာ ဘေးသို့ကပျ၍ လမျးဖယျပေး လိုကျတော့ မိုငျမိုငျက စကျရုပျတဈရုပျလို ကုတငျကွီးဆီသို့ ဦးတညျရှရှေု့၍ အခနျးထဲသို့ တဈလှမျးခငျြးဝငျ၍လာသညျ။ သူ့ အရှမှေ့ ဖွတျသှားစဉျ မှေးပြံ့သောရနံ့တှကေ ဧရာတဈကိုယျလုံးကို လှမျးခွုံ၍သှားသညျ။ ဧရာ၏ အသိစိတျတှေ ကငျးမှနျးမ သိ ကငျးမဲ့၍လာသညျ။ ဖှငျ့လိုကျမိသော အိပျခနျးတံခါးကို အသာပွနျစေ့၍ ခါးမှပုဆိုးကို ခြှတျခပြွီး မိုငျမိုငျ၏ နောကျမှ လိုကျ လာခဲ့မိသညျ။ ဧရာ၏ ရှမှေ့ ထောငျမတျနသေော လီးခြောငျးကွီးက ရှမှေ့ မိုငျမိုငျကို ထိုးရနျခြိနျရှယျထားသော လှံတံသဖှယျ ဖွဈနသေညျ။
ကုတငျကွီးဘေးရောကျတော့ မိုငျမိုငျက ဧရာကို ကြောပေးထားလကျြမှ သူမ၏ ပုခုံးပျေါမှ ဂါဝနျသိုငျးကွိုးလေး တှကေို ဖွညျခလြိုကျသညျ။ ဂါဝနျလေးက လြောကနဲ ကသြှားရငျး ခွဖြေားတှငျပုံသှားသညျ။ မိုငျမိုငျက ခါးတဈဆဈခြိုးကုနျး၍ သူမ၏ ခွဖြေားတှငျ ပုံကနြသေော ဂါဝနျလေးကို ငုံ့၍အဖယျ… လုံးတဈကားစှငျ့သှားသော ဖှေးနုသညျ့ တငျသားအစုံကွားမှ နောကျသို့ပွူးထှကျနသေော စောကျပတျလေးက နီကငျြ့ကငျြ့အမှေးလေးမြားခွံရံလကျြ အိပျခနျးထဲမှ မီးရောငျအောကျတှငျ ရှမျးစိုတောကျပ၍နသေညျ။ စောစောကတညျးက မိုငျမိုငျ အရညျကွညျလေးတှေ စိမျ့ထှကျနကွေောငျး သိသာလှသညျ။ ဧရာ ဘာကိုမှ မစဉျးစားမိတော့ သူ့ကိုကာမဆန်ဒတှကေ အနိုငျယူသှားပွီ။
ရှမှေ့ ဂါဝနျကို ငုံ့ကောကျနသေော မိုငျမိုငျ၏ ခါးလေးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ စုံကိုငျပွီး တဆတျဆတျတုနျနသေော လီးထိပျကွီးကို မိုငျမိုငျ၏ နောကျသို့ပွူးထှကျနသေော စောကျပတျ နှုတျခမျးသားလေး နှဈခုကွားသို့တကေ့ာ တရှိနျတိုး ဆောငျ့သှငျးလိုကျတော့သညျ။ “ ဗွဈ….ဗွဈ….အ….အီး…..အား…..” စောကျခေါငျးထဲတှငျ ထှကျနသေော အရညျမြားနှငျ့ ဧရာ၏ ဆောငျ့အားကွောငျ့ လီးတဈခြောငျးလုံး စောကျခေါငျးထဲ သို့ ဝငျသှားသညျ။ မိုငျမိုငျမှာ ဗွုံးကနဲ ကုတငျဘောငျကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ကိုငျပွီး တငျး၍ခံသညျ။ အသံမထှကျမိအောငျ နှုတျ ခမျးကို ပွတျထှကျလုမတတျကိုကျပွီး တဈကိုယျလုံးအသားလေးတှေ တဆတျဆတျတုနျနသေညျ။
မခြိမဆနျ့ နာကငျြနေ သျောလညျး သူမ၏ တဈခြိနျလုံးထကွှနသေော အာသာဆန်ဒကတော့ ကနြေပျသယောငျ ဖွဈသှားသညျ။ ဧရာ မထိနျးနိုငျ သောစိတျကွောငျ့ ခပျပွငျးပွငျး ဆယျခကျြလောကျဆောငျ့ပွီးတော့မှ သတိရသှားသညျ။ “ မိုငျမိုငျ….သိပျနာသှားလားဟငျ….” “ ဟို…ကိုကို ကောငျးရငျပွီးတာပါပဲ…” ဟု ပွောရငျး မိုငျမိုငျက ဖငျလေးကို ပို၍ကုနျးပေးသညျ။
အခနျးဝမှ သူတို့ကိုရပျကွညျ့နသေော သီတာပွုံးတဈယောကျ မကျြရညျတှေ တသှငျသှငျ စီးကလြာသညျ။ မိုငျမိုငျ အိပျယာပျေါမှ ထသှားကတညျးက သီတာပွုံး ဘာလဲဆိုတာကို ခနျ့မှနျးမိပွီးသား ဒါပမေယျ့ သီတာပွုံး တားနိုငျလြှကျနှငျ့ မ တားလိုကျတာဖွဈသညျ။ အခုတော့ အိပျခနျးထဲမှ မိုငျမိုငျ၏ ခါးလေးကိုကိုငျ၍ ဧရာက မကျမကျရရကွီးလိုးနပွေီး မိုငျမိုငျခမြာ မှာလညျး အငျ့ကနဲ အငျ့ကနဲ အသံလေးတှထှေကျ၍ အံကွိတျပွီး ခံနသေညျ။ တပွှတျ…ပွှတျ….တအငျ့…အငျ့…အသံလေး မြားက အိပျခနျးထဲတှငျ ညံလကျြရှိလတေော့သညျ။
တီတီလေးရေ…တီတီလေး…လာပါအုံး…မြန်မြန်…အား…အား….” အိပ်ခန်းထဲမှ ‘ မိုင်မိုင် ’ ၏ အလန့်တကြား အသံကြောင့် သီတာပြုံးလက်ထဲမှ စာစောင်ကိုချ၍ ကမန်းကတန်းထ၍ ပြေးလာမိသည်။ အိပ်ခန်းထဲလှမ်းဝင်လိုက်တော့ မှန်ရှေ့မှာရပ်နေသော မိုင်မိုင်၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွင် ဘာအဝတ်အစား မှမရှိ။ သူမကျောပြင်လေးကို မှန်ဖက်သို့လှည့်ကာ ကြည့်၍နေသည်။ “ မိုင်လေး….ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်….” သီတာပြုံး အမောတကော မေးလိုက်မိသည်။ “ သမီးအနာက တစစ်စစ်နဲ့ ကိုက်နေတယ်….တီတီလေး…” “ ဟင်…ပြစမ်း…” မိုင်မိုင့်ညာဘက်လက်ပြင်တွင် မွှေးကျွတ်နာပေါက်နေကြောင်း သီတာပြုံး သိထားသည်။
“ ဟယ်…အနာက ပြည်တွေနဲ့ မှည့်နေပြီ သမီး…တီတီလေး ညှစ်ပေးမယ်….ဒီပြည်တွေထွက်သွားမှ ကိုက်တာသက် သာပြီး အနာပျောက်သွားမှာ….” ပြောလဲပြော ပြည်တွေနဲ့စူတက်နေသော မွှေးကျွတ်နာ၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီသို့ လက်မနှစ်ဖက်ကို တင်လိုက် သည်။ ပြီးတော့ ဆတ်ကနဲ ညှစ်လိုက်သည်။ “ အား….အမလေး….သေပါပြီ….အား…အား….” မိုင်မိုင်ငယ်သံပါအောင် အော်လိုက်သည်။ သီတာပြုံး လက်တွန့်သွားသည်။ မိုင်မိုင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်ရည် တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာနေသည်။ အနာကပွင့်သွားပြီ ပြည်တွေတစွန်းတစထွက်နေပြီ နောက်ထပ်နှစ်ချက်လောက်ညှစ် လိုက်ရင် အထဲကပြည်ပုတ်တွေရော အမြစ်ပါထွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် မိုင်မိုင်က ဘယ်လိုမှ ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ပြီ။
“ မိုင်လေး….ရှေ့ကိုခါးလေးနည်းနည်းကိုင်းလိုက်…” “ ဟင်…တီတီလေး ထပ်ညှစ်အုံးမလို့လား….သမီး မခံနိုင်တော့ဘူး…ဟင့်…ဟင့်….” “ မညှစ်တော့ပါဘူး သမီးရဲ့…ရှေ့ကိုနည်းနည်းကိုင်းလိုက်နော်….မိုင်လေး မနာစေရပါဘူး…” မိုင်မိုင်က သီတာပြုံးကို မရဲတရဲဖြင့် မျက်လုံးဝိုင်းကြီးများဖြင့် လှည့်ကြည့်ပြီး ခါးကိုရှေ့သို့ကိုင်းလိုက်သည်။ သီတာပြုံး သူမ၏ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို အနာတွင်ကပ်၍ အားကုန်စုပ်ထုတ်လိုက်သည်။ ပြည်ပုတ်သွေးပုတ်တွေက သီတာပြုံး ပါးစပ်ထဲ ပါ လာသည်။ “ အ…အ…အဟင်း…တီတီလေးရယ်…” သီတာပြုံး ပြတင်းပေါက်ဘေးသို့သွား၍ ပါးစပ်ထဲမှဟာတွေကို ထွေးထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ မိုင်လေးကိုပြုံး၍ ကြည့်လိုက်သည်။ မိုင်မိုင်က မျက်ရည်အဝဲသား မျက်လုံးလေးတွေကို မျက်တောင်တဖြတ်ဖြတ်ခပ်ရင်း သီတာပြုံးကို ကြည့် သည်။
“ တီတီလေးရယ်…” မိုင်မိုင် သီတာပြုံး၏ ခါးကိုဖက်ကာ ရင်ခွင်ထဲသို့ ပြေးဝင်လိုက်လေတော့သည်။ သီတာပြုံးက မိုင်မိုင်၏ အဒေါ်ဖြစ်သည်။ သီတာပြုံးကို မိုင်မိုင်ဖခင်၏ ညီမက မွေးခဲ့တာဖြစ်သည်။ မိုင်မိုင်၏ မိဘများ တွင် သားသမီးမထွန်းကား၍ သီတာပြုံးအား လေးနှစ်သမီးအရွယ်ကပင် ခေါ်ယူ၍ မွေးစားခဲ့သည်။ သီတာပြုံး (၅)တန်း ရောက်သောနှစ်တွင်မှ မိုင်မိုင်ကို မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်သည်။ မိုင်မိုင်က သီတာပြုံးလက်ပေါ်တွင်ပင် သားသမီးနှင့်မခြား ကြီးပြင်း လာခဲ့ရတာဖြစ်သည်။ သီတာပြုံးကအခု အသက်(၂၅)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး မိုင်မိုင်က အသက်(၁၅)နှစ်၊ (၁၀)တန်း ကျောင်းသူဖြစ် သည်။ မိုင်မိုင်၏ မိဘများက လွန်ခဲ့သော (၃)နှစ်ကျော်လောက်ကပင် ပြည်ပတွင်သွား၍ အလုပ်လုပ်နေသည်။
မိုင်မိုင်က သီတာပြုံးကို မခွဲနိုင်သဖြင့် မိဘများနှင့် လိုက်မသွားခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်က သီတာပြုံး အိမ်ထောင်ကျသဖြင့် မိုင်မိုင် ၏ မိဘများ တခေါက်ပြန်လာခဲ့ရသည်။ အပြန်တွင် မိုင်မိုင်ကို ပြည်ပသို့လိုက်ခဲ့ရန်ခေါ်သော်လည်း မိုင်မိုင်က လိုက်မသွားခဲ့ ပေ။ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ သီတာပြုံးကို မိုင်မိုင် မခွဲနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သီတာပြုံး၏ ယောက်ျား ‘ ဧရာ ’ က အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လှိုင်သာယာက စက်ရုံတစ်ရုံတွင် ကြီးကြပ်ရေးမှူးဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်မှ နှစ်ရက်သာ အိမ်သို့ ပြန်လာရသည်။ ဧရာကလည်း မိုင်မိုင်ကို သီတာပြုံးကဲ့သို့ပင် သားသမီးတစ်ယောက်လို သဘောထားသည်။ မိုင်မိုင့်မျက်နှာ အညိုမခံ လိုလေသေးမရှိအောင် ထားသည်။ အလိုလိုက်သည်။
ယုတ်စွအဆုံး တစ်ပတ်မှ နှစ်ရက်ထဲ အိမ်မှာနေရတဲ့ ဧရာက သူပြန်ရောက်တဲ့ရက် မိုင်မိုင်က သီတာပြုံးကို သူမနှင့်လာအိပ်ရန်ပြောလျှင်ပင် ဧရာက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်ပြုခဲ့သည်သာ ဖြစ်သည်။ ကလေးစိတ်မပျောက်သေးသော မိုင်မိုင်၏ ဒဏ်ကို ဧရာနှင့် သီတာပြုံးတို့ လင်မယားမှာ မိုင်မိုင်ကို ချစ်တဲ့စိတ်ဖြင့် ခံခဲ့ရလေသည်။ ‘ အဟင့် ’ ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်းလေးနှစ်လွှာဟကာ ကိုယ်လုံးလေးတွန့်သွားခိုက် သီတာပြုံး၏ နို့အုံလေးက ဧရာ၏ ပါးစပ် ထဲသို့ လက်တစ်လုံးလောက် ပို၍ဝင်သွားသည်။ သီတာပြုံး မတွန့်လို့လည်း မနေနိုင်၊ ကြည့်ပါအုံး နို့အုံနုနုညက်ညက်လေး ထိပ်ပိုင်းကို ပါးစပ်ထဲသွားထားပြီး နို့သီးခေါင်းအောက်ခြေက အနီရောင်အဝန်းအဝိုင်းလေးကို ဧရာလျှာကြီးက ဖိဖိပြီး ယက်နေ သည်။ နို့အုံတစ်ခုလုံးတွင် ဒီနေရာက အကြောတွေအများဆုံးနေရာ နို့သီးခေါင်းလေးထက်ပင် ပိုပြီးအာရုံကြောတွေများကာ အရသာကိုပိုပြီး ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို မဖွင့်ဘဲ ဧရာ၏ အထိအတွေ့အရသာတွေကြားတွင် မိန်းမူးနေရင်းက သီတာပြုံးမှာ ဧရာ၏ ကျောပြင်ကြီးကို သူမလက်ဖဝါးနုနုလေးဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေလေသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ဘာအ ဝတ်အစားမှမရှိဘဲ ဝတ်လစ်စလစ်နှင့် ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်း နို့အုံနုနုညက်ညက်လေးနှစ်လုံးကို မက်မက်မောမော စို့ပေးနေရုံမက ဧရာ၏ လက်တစ်ဖက်က သီတာပြုံး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲရောက်ကာ တဖြေးဖြေး ဖောင်းဖောင်းပြီးတင်း တင်းလာသော စောက်ပတ်အုံလေးကို လက်ဖဝါးထဲထည့်ကာ ဆုတ်နယ်ပွတ်သပ်၍ နေသေးသည်။ သီတာပြုံးက အမွှေးသန် သည်။ ဒါကြောင့် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် ရိတ်လေ့ရှိသည်။
ပြန်ထွက်လာသော အမွှေးငုတ်တိုလေးတွေ၏ စူးစူးရှရှလေးဖြစ် ၍နေသည်က ဧရာအဖို့ ကိုင်ရတာပို၍ အရသာတွေ့နေစရာ ဖြစ်နေသည်။ ပြီးတော့ ဧရာ၏လက်က အကွဲကြောင်းလေးကို စမ်းလိုက်သည်။ စိုစိုစွတ်စွတ်လေး ဖြစ်နေသည်။ ဧရာ၏ လက်ညှိုးထိပ်က စောက်စေ့လေးကို တို့ထိကလိလိုက်သည်။ “ အ…ကို…” ‘ ကို ’ ဆိုတာကို သံရှည်လေးဆွဲရင်း ပေါင်ကြားမှ ဧရာ၏လက်ကို သူမ၏ပေါင်လေးနှစ်လုံးဖြင့် ညှပ်လိုက်မိသည်။ ဧရာ လက်ညှိုးထိပ်က တွင်းဝအိအိပျော့ပျော့လေးကို ပွတ်သပ်ကလိရင်း အထဲသို့ဖြေးဖြေးလေး ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ သူ့ ကျောကုန်းကို ပွတ်သပ်၍နေသော သီတာပြုံး၏ လက်လေးက တဒင်္ဂရပ်သွားပြီး ကျောကုန်းကို ဖိ၍ဖက်လိုက်သည်ကို ခံစား လိုက်ရသည်။
လက်ညှိုးကို အထဲသို့လက်နှစ်ဆစ်ခန့် သွင်းပြီးမှ လက်ညှိုးထိပ်ကလေးကိုကွေးကာ အထဲမှအတွင်းသားလေး တွေကို ကလိသည်ပွတ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကလည်း နို့အုံလေးကို ပါးစပ်ထဲထည့်၍ စုပ်ထားခြင်းမပြုတော့ဘဲ နို့သီး ခေါင်းလေးတစ်ခုထဲကိုသာစုပ်ကာ လျှာထိပ်ဖြင့် ထိုးထိုးပြီးပေးသည်။ အထဲမှ အရည်လေးတွေ သိသိသာသာကြီး ရွှဲ၍ထွက် ထွက်လာကြောင်း ဧရာ၏ လက်ညှိုးလေးက သိနေသည်။ သီတာပြုံးကလည်း စောစောတုန်းကလို အိနြေ္ဒမရတော့ချေ။ လှုပ် လှုပ်ရွရွလေး ဖြစ်လာသည်။
“ ကို…ကို…တော်ပြီကွာ…ကို့…လက်ကြီးထုတ်လိုက်တော့ကွာ…ဟင်း….ဟင်း….” သီတာပြုံး၏ စိတ်တွေ အတော်ကြီးထလာပြီဖြစ်ကြောင်း ဧရာ သိလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်ထဲသွင်းထားသော လက်ညှိုးကိုအသာလေး ဆွဲထုတ်ပြီး သူ့မျက်နှာကိုလည်း နို့အုံလေးတွေပေါ်မှ ခွာလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သီတာပြုံး၏ ပါးလေး တဖက်ကို ရွှတ်ကနဲနေအောင် နမ်းလိုက်ပြီး သီတာပြုံး၏ ဘေးသို့ လှဲချလိုက်သည်။ သီတာပြုံးမှာ ဧရာဖက်သို့ လှည့်လိုက်ပြီး ဧရာကို ဖက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဧရာ၏ အောက်ပိုင်းကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးလျှင် ဧရာ၏ နှုတ်ခမ်းကို ဖိကပ်၍ စုပ် လိုက်သည်။
ပြီးတော့ သီတာပြုံး၏ လက်ဖဝါးလေးတစ်ဖက်က ဧရာ၏ ဝမ်းဗိုက်ပေါ်ရောက်သွားပြီး ချက်အောက်ဆီးစပ်ကို လျှောတိုက်၍ ပွတ်ရင်း ဖြူလွှသောသူမ၏ လက်ချောင်းလေးများက လမွှေးတွေကြား တိုးဝင်သွားသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် နှုတ်ခမ်းခြင်းကလည်း ဂဟေဆက်နေကြသည်။ သူမ၏ လက်က လမွှေးတွေကို လုံးချေလိုက် ထိုးဖွလိုက် ဆော့ကစားရင်း မတ်တောင်နေသော သန်မာလှသည့် ဧရာ၏ လီးချောင်းကြီးကို လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ရစ်ပတ်ကာ ကိုင်လိုက်သည်။ ပြီး တော့ တစ်ချက်လောက်ညှစ်လိုက်ပြီးနောက် ဒစ်ကြီးကိုဖြဲချလိုက်ပြီး နက်ရှိုင်းသောဒစ်ကြီးအကြားသို့ သူမ၏ လက်မထိပ် လေးက တိုးဝင်သွားကာ ဒစ်ကြီးပတ်ပတ်လည်ကို ကပ်၍ ပွတ်လိုက်သည်။
“ အ…ဟ…အင်း….သီတာ…အ…အ…ဟင်း….ဟင်း….” “ ပြတ်…” “ အဟင်း…သူ…သူများကို ကလိချင်တိုင်း ကလိနေတော့ကောင်းတယ်…သူ့ကျတော့ တချက်လေး လုပ်လိုက်တာနဲ့ ….ဟွန်း…မပြောလိုက်ချင်ဘူး….” နှုတ်ခမ်းအစုံကို ဆွဲခွာရင်း မျက်စောင်းလှလှလေးထိုးကာ သီတာပြုံးက ပြောလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမလက်တစ် ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားသော ဧရာ၏ လီးကြီးကို ကြည့်လိုက်သည်။ အသဲယားလောက်အောင် ဖောင်းကားနေသော ထိပ်ဖူး ကြီး၏ ထိပ်အပေါက်လေးမှ အရည်ကြည်လေးတွေ စို့ထွက်နေကြောင်း တွေ့လိုက်ရသည်။ သီတာပြုံး၏ မျက်နှာလေးပြုံး ယောင်သန်းသွားပြီး သူမ၏ လက်လေးကို ဂွင်းလျှောလုပ်ကာ ထောင်မတ်နေသော လီးကြီးကို စုန်ကာဆန်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေး သည်။ လေးငါးကြိမ်မျှ လုပ်ပေးလိုက်ပြီးချိန်တွင်ပင် ဧရာ၏ လီးကြီးက တဆစ်ဆစ်ဖြစ်၍လာသည်။ သီတာပြုံးမှာ ဧရာ၏ ပါးကို ဖိကပ်၍ အားရပါးရတစ်ချက်မျှ နမ်းလိုက်ပြီး ဧရာ၏ ခါးပေါ်သို့ ခွတက်လိုက်သည်။ သူမ၏ အသက်ရှူသံတွေက ပြင်းထန်နေသည်။
ထို့နောက် ကိုယ်ကိုမတ်၍ ဖင်ကြီးကို မြှောက်လိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်မှ ဆုတ်ကိုင်ထားသော လီးကြီးကို စောက်ပတ်ဝတွင် တေ့လိုက်ပြီး ဖင်ကြီးကို တဖြေးဖြေးခြင်းဖိ၍ချကာ လီးကြီးကို သွင်းယူသည်။ ဧရာ ပက်လက်လှန်လျက်မှ အသာလေးငြိမ်နေပြီး သီတာပြုံးကို ကြည့်နေသည်။ ရမ္မက်စိတ်တွေ ပြင်းပြနေသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်က လီးကို စောက်ပတ်ထဲသို့ သူမဘာသာ အာသာဆန္ဒပြင်းပြစွာဖြင့် သွင်းယူနေပုံမှာ မြင်ရတာ အရသာရှိလှသည်။ စောက်ပတ်ဝသို့ လီး ထိပ်ဖူးကြီး တိုးဝင်သွားချိန်မှာ သီတာပြုံး၏ ပါးစပ်လေးဟ၍သွားသည်။ သူမ၏ ဖင်ကြီးက တဖြေးဖြေးဖိချသဖြင့် လီးကြီးက ဒစ်ကြီးတစ်ခုလုံး ဝင်သွားချိန်တွင် သိတာပြုံး၏ မျက်တောင်ကော့ကော့လေးတွေ စင်းကျသွားသည်။ စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီး ကြီးတစ်ဝက်လောက်ဝင်သွားတော့ သူမ၏ မျက်လုံးလေးတွေက မှိတ်ထားပြီးဖြစ်နေသည်။
“ ဗြစ်…” “ ဖတ်…” စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးကြီးတဆုံးဝင်ရန် လက်နှစ်လုံးလောက်အလိုတွင်တော့ လီးကိုဖြေးဖြေးချင်းသွင်းနေရာမှ ဆတ်ကနဲဖိချကာ တဆုံးသွင်းလိုက်ရင်း သီတာပြုံးမှာ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမ၏ကိုယ်ကို ရှေ့သို့ငိုက်လိုက်ပြီး ဧရာ၏ ရင်အုံထက်သို့ သူမ၏ လက်လေးနှစ်ဖက်က ထောက်ပြီး သီတာပြုံးမှာ လီးကို စောက်ခေါင်းထဲ သွင်းရင်း အတော်ယားနေပုံရသည်။
ခပ်သွက်သွက်ကြီး (၁၀)ချက်မျှ ဆောင့်၍ စိတ်ရှိလက်ရှိ လိုးပစ်လိုက်သည်။ “ ဗြစ်…ဖွတ်…ဗြစ်…ပြွတ်…ဖတ်…ပလွတ်…ဗြစ်…ဗြစ်….” ပြီးတော့မှ သီတာပြုံးမှာ သူမ၏ ဖင်ကြီးကို ကြွကြွပြီး တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်၍လိုးသည်။ ဧရာက သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်လှမ်း၍ဆွဲရင်း သီတာပြုံး ဆောင့်အချတွင် အောက်မှနေ၍ သူ၏လီးကြီးကို ကော့၍ကော့၍ တင်ပေးသည်။ သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ အရည်ကြည်တွေက သိသိသာသာကြီး စီးကျလာပြီး ဧရာ၏ လမွှေးအုံ တစ်ခုလုံး ရွှဲနစ်၍နေသည်။
သီတာပြုံးမှာ မျက်လုံးလေးတွေကို မဖွင့်တော့ဘဲ အထိအတွေ့အာရုံကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် ခံစားရင်း ခပ်ပြင်းပြင်းတချက် ခြင်း ဆောင့်လိုက် ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်လိုက်ဖြင့် သူမစိတ်တိုင်းကျလိုးနေသည်။ “ ဗြစ်….ပလွတ်…ပလပ်…စွတ်…ဖွတ်….ဗြစ်…ဗြစ်….” လိုးဆောင့်ရာ၌ တစ်ချက်ခြင်း ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးသည်နှင့် ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်လိုးတာမျိုးရှိသလို ဆောင့် ရာ၌လည်း ဆီးခုံခြင်းကပ်၍ ဆောင့်တာနှင့် ခွာ၍ ဆောင့်တာမျိုးလည်း ရှိလေသည်။ မိန်းမတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အကြိုက်ခြင်းမတူပေ။ ဘယ်လိုဆောင့်တာကြိုက်သလဲဆိုတာ သိလိုလျှင် မိန်းကလေးဖြစ်သူကို စည်းရုံး၍ အပေါ်သို့တင်ပေး လိုက်ပါ။ သူတို့အကြိုက် ဆောင့်ပြပါလိမ့်မည်။ သီတာပြုံးကတော့ တစ်ချက်ခြင်း မှန်မှန်ဆောင့်လိုက် ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်လိုက် လိုးတာကိုကြိုက်ပုံရသည်။
“ ဗြစ်…ပလွတ်…ပြွတ်….ဖွတ်…ဖွတ်….ပလွတ်….ဗြစ်…ဗြစ်…ဟင်း…ဟင်း….ဟင်း….” သီတာပြုံးမှာ အပေါ်မှ စိတ်ကြိုက်ဆောင့်ရင်း ဆောင့်ရင်း အောက်ဖက်စောက်ခေါင်းထဲမှ အရည်တွေ ရွှဲနစ်လာသလို သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံး ဖွေးဖွေးလေးမှာလည်း တစ်ကိုယ်လုံးချွေးတွေ ပြန်လာသည်။ ပြီးတော့ တစ်ချက်ဆောင့် လိုက်တိုင်း ဟင်းကနဲ ဟင်းကနဲ အသက်ပြင်းပြင်းရှူသောအသံက ထွက်နေသည်။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…ပြွတ်…ဖွပ်…ဖွပ်….ဟင်း…ဟင်း….” “ ပြတ်…” “ ဘုန်း…ဟင်း…ဟင်း….ဟင်း….” အားရပါးရခပ်သွက်သွက်ကြီး အားရပါးရလေး ငါးချက်မျှ ဆောင့်လိုးလိုက်ပြီးနောက် ဗြုံးကနဲ သီတာပြုံးမှာ ဖင်ကြီး ကိုကြွ၍ လီးကိုချွတ်လိုက်ပြီး ဧရာ၏ ဘေးအိပ်ယာပေါ်သို့ ‘ ဘုန်း ’ ကနဲ ပက်လက်လှန်လှဲချ၍ မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ကာ တဟင်းဟင်း အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းထန်နေသည်။ ဧရာက ပက်လက်လှဲနေရာမှ ခါးတဆစ်ချိုး ထထိုင်လိုက်ပြီး စင်းထား သော သီတာပြုံး၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲထောင်လိုက်သည်။ သူအပေါ်မှ တလှည့်တက်လုပ်မည်ပေါ့။ သီတာပြုံး ပေါင်နှစ် လုံးကို အတင်းစေ့ကပ်ထားသည်။
“ နေ…နေ…နေ..အုံး..ကို….ခဏ…သီတာ ပြီးချင်သလို ဖြစ်နေလို့ ခဏနားတာ…အဟင်း…ဟင်း….” ပြီးခါနီး ခဏနား၍ အရသာကိုတာရှည် ခံစားလိုသည့် သဘောပင်… သီတာပြုံး၏ ရင်ဘတ်လေးက နိမ့်ချီမြင့်ချီ ဖြစ်၍ နေသည်။ ဧရာ သူမကို ငုံ၍ဖက်လိုက်ပြီး ပါးပြင်လေးနှစ်ဖက်ကို နမ်း သည်။ ပြီး နှုတ်ခမ်းပါးလေးအစုံကို စုပ်နမ်းသည်။ သီတာပြုံး၏ ကိုယ်လုံးလေးတစ်ခုလုံး ပူနွေး၍ နေသည်။ ဧရာက သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးမှသည် လည်တိုင် ဖွေးဖွေးလေးတွေကို စုပ်နမ်းသည်။ ပြီးတော့ သီတာပြုံး၏ ပုခုံးလုံးလုံးလေးနှင့် ပြည့်တင်း သော ရင်ညွန့်သားလေးများ ထိုမှတဖန် ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး နို့အုံလေးတွေကို စို့ပေးသည်။ အတင်းစေ့ကပ်ထားသော သီတာပြုံး ၏ ပေါင်လုံးလေးနှစ်လုံး တဖြေးဖြေးလျော့ကျ၍ ကင်းကွာလာသည်။ နောက်နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်နေသော သူမ၏ ရင်ဘတ်လေးက တည်ငြိမ်လာပြီး ရင်ဘတ်လေးကို ကော့၍ ကော့၍ နို့စို့နေသော ဧရာ၏ ပါးစပ်သို့ ကပ်၍ကပ်၍ ပေးသည်။
“ ကို…” “ ပြွတ်…ဟင်…” ဧရာ နို့ကိုပါးစပ်မှ ချွတ်၍ထူးသည်။ “ လုပ်ကျရအောင်နော်….ကိုက နောက်ကနေလုပ်နော်….” သီတာပြုံး ကုန်းပေးတော့မည်ကို ဧရာ သိလိုက်သည်။ သီတာပြုံး၏ ကိုယ်ပေါ်မှာမိုးထားသော သူ၏ ကိုယ်အပေါ် ပိုင်းကို ဧရာဖယ်ပေးလိုက်တော့ သီတာပြုံးက ပက်လက်လှဲနေရာမှ လက်လေးတစ်ဖက်ထောက်၍ ထထိုင်လိုက်သည်။ ပြီး တော့ စောစောက သူမတက်လိုးထားသဖြင့် အရည်များဖြင့် ရွှဲစိုလျက် ထောင်မတ်နေသော ဧရာ၏ လီးကြီးကို မက်မောတပ် မက်စွာဖြင့် ကြည့်လိုက်ပြီး လက်ဖျားလေးဖြင့် လှမ်း၍ ထကိုင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ မျက်လုံးလေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ် လုပ် လိုက်ပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာပင် ဒူးထောက်၍ လေးဖက်ထောက်လိုက်သည်။
ဧရာက သီတာပြုံး၏ နောက်ဖက်သို့ ဝင်လိုက်ပြီး ဒူး ထောက်လိုက်ပြီးချိန်တွင် သီတာပြုံးက ရှေ့ဖက်မှဆန့်၍ ထောက်ထားသော သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ကို ကွေး၍ချလိုက်ပြီး ဒ တောင်ဆစ်နှင့်ထောက်ကာ နဖူးကို အိပ်ယာနှင့်ထိ၍ ဝပ်နေလိုက်ရာ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပေးထားသည့်ပုံ ဖြစ်သွားသည်။ နဂိုထဲက တင်သားတွေလုံးတစ် ကားစွင့်သော သီတာပြုံး၏ ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးများမှာ ယခုလို ဖင်ဘူးတောင်းထောင်လိုက် တော့ အလွန်ပင် မက်မောစရာ ကောင်းလှသည်။ ပြီးတော့ ဖင်သားကြီး နှစ်လုံးကြားမှ အောက်သို့စူထွက်နေသော စောက် ဖုတ်ကြီးမှာ စောစောက လိုးထားသော အရှိန်နှင့် နှုတ်ခမ်းသားကြီးများမှာ နီရဲဖောင်းတင်းနေပြီး အရည်တို့က ရွှဲ၍နေသည်။ နောက်မှကြည့်ရင်း ဧရာ၏ လီးကြီးက တဆတ်ဆတ် ဖြစ်လာသည်။ ဧရာက သီတာပြုံး၏ ခါးလေးကို လှမ်းကိုင်၍ ရှေ့ကို ကပ်ကာ တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသော လီးထိပ်ကြီးကို စောက်ဖုတ်ဝသို့ တေ့လိုက်ရာ သီတာပြုံးက ဒူးထောက်ထားသော သူမ ၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အသာလေးချဲပေးလိုက်သည်။
“ ဗြစ်….ဒုတ်….အ…ဟား….” စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်လာသော ဧရာက လီးကို တချက်တည်းနှင့် ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ သီတာပြုံး၏ ခေါင်းလေး ထောင်၍ သွားသည်။ လီးကတဆုံးဝင်သွားပြီး သီတာပြုံး စောစောကအတန်ငယ်ဟပေးလိုက်သော ဒူးထောက်ထားသော ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ပြန်၍ စေ့လိုက်သည်။ “ ကို…” “ ဟင်…” “ တခါထဲသာ ပြီးအောင်လုပ်လိုက်တော့ကွာနော်….” “ အင်း….” ဧရာ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးဝင်နေသော လီးကို ဆွဲဆွဲထုတ်ပြီး တချက်ခြင်း ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်လိုးသည်။ ပြီး တော့တဖန် ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်လိုးပြန်သည်။ “ ဗြစ်…ပလွတ်…အင့်….အင့်…ပလွတ်….ဗြစ်….ဗြစ်…အင့်….အင်း…..” သီတာပြုံးကြိုက်သော ဆောင့်နည်းအတိုင်း တချက်ခြင်း ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုက်၊ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်လိုက်ဖြင့် ဆောင့်လိုးရင်း ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ထားသော သီတာပြုံး၏ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ဖက်မှ နို့နှစ်လုံးကို လှမ်း၍ဆွဲရင်း ဆောင့် လိုးသည်။
“ ဗြစ်…ပြွတ်…ဖွတ်….ပလွတ်….ဖွတ်….ဗြစ်….” “ အင့်….အင့်….အင်း…အင့်…..” သီတာပြုံးကလည်း ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ထားသော သူမ၏ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ဆောင့်ဆောင့်ပေးသည်။ အိပ်ယာ ပေါ်သို့ နဖူးလေးတိုက်၍ထားသော သီတာပြုံး၏ ဦးခေါင်းလေးမှာ ခံစားရခက်ပုံဖြင့် ဘယ်ညာခါယမ်းနေသည်။ “ ဗြစ်…ဗြစ်….ဖွတ်…ဗြစ်….အင့်…အင့်…အင့်ဟင့်…လုပ်လုပ်….ကို…ခပ်နာနာလေး….လုပ်….ပြီး…ပြီး…တော့မယ်. ….” ဧရာ သူမ၏ ခါးလေးကိုပြန်၍ ကိုင်လိုက်ပြီး အားကုန်ဆောင့်၍ ခပ်သွက်သွက်ကြီး လိုးတော့သည်။ “ ဗြစ်…ပြွတ်…အား…ဖတ်…ဗြစ်….ဗြစ်….ပလွတ်…အား….ကို…ကို…အမလေး….ကိုရယ်….အား….အ….” ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ထားသော သီတာပြုံး၏ ခါးလေးမှာ ဗြုံးကနဲကုန်းထလာပြီး ဖင်ကြီးမှာ ခါယမ်းသွားသည်။ ဧရာ က သီတာပြုံး၏ ဖင်ကြီးကို တည်ငြိမ်အောင် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်လိုက်ပြီး သူ၏ လီးကြီးကို အတင်းဆောင့်၍ ထိုးထည့်ကာ သုတ်ရည်များကို ပန်းထည့်လိုက်လေသည်။ ပြီးတော့ တဖြေးဖြေး အိပ်ယာပေါ်သို့မှောက်၍ ကျသွားသော သီတာပြုံး၏ ကိုယ် ပေါ်သို့ ဧရာမှာ မှောက်လျက်သားပါသွားလေတော့သည်။
“ ဘုတ်…” မျက်လုံးမှိတ်၍ အမောဖြေနေသော သီတာပြုံး၏ မျက်လုံးလေးများ ဖွင့်လာသည်။ တဖက်မှ မိုင်မိုင်၏ အခန်းထဲမှ အသံတသံကြားလိုက်ရသည်။ သီတာပြုံးတို့ အိပ်သည့် ကုတင်ကြီးက တဖက်ခန်းနှင့်ခြား၍ ကာထားသော နံရံဘေးတွင်ကပ် ၍ ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မိုင်မိုင်များ သူတို့ကို ချောင်းကြည့်နေတာလားဟူသော အတွေးက သီတာပြုံးကို ခေါင်းနပမ်းကြီးသွား စေတော့သည်။ မနက်စောစောတွင် ‘ ဧရာ ’ စက်ရုံသို့ ပြန်သွားရန်ရှိသဖြင့် သီတာပြုံးတစ်ယောက် အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ မိုင်မိုင်တစ် ယောက် အိပ်ယာမှ ထပြီလား မထသေးဘူးလား ဆိုတာကို သတိမထားမိပေ။
ဧရာ ထွက်သွားပြီးတော့ သီတာပြုံးမှာ မိုင်မိုင် ၏ အိပ်ခန်းရှေ့သို့ ရောက်လာရသည်။ အချိန်က မနက် (၈) နာရီထိုးခါနီးပြီဖြစ်သည်။ သီတာပြုံး အိပ်ခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့် လိုက်တော့ တံခါးက အလွယ်တကူ ပွင့်၍သွားသည်။ အိပ်ခန်းထဲရှိ စားပွဲတွင် မိုင်မိုင် ထိုင်၍ငေါင်နေသည်ကို သီတာပြုံး ဗြုံးကနဲ တွေ့လိုက်ရသည်။ တံခါးဖွင့်သံကြား၍ မိုင်မိုင်က လှည့်ကြည့်သည်။
“ ဟင်….တီတီလေးပါလား….” “ မိုင်မိုင်….သမီး…ကျူရှင်မသွားသေးဘူးလား….” “ ဟင့်အင်း….” သီတာပြုံးတို့မှာ စမ်းချောင်းတွင်နေ၍ မိုင်မိုင် တက်ရသောကျူရှင်မှာ တစ်လမ်းကျော်တွင်ရှိသဖြင့် လမ်းလျှောက်၍ သွားလို့ရသည်။ ကျူရှင်က မနက် (၈) နာရီ တက်ရတာကို သီတာပြုံး သိသည်။ “ ဘာဖြစ်လို့လဲ….သမီးရဲ့….သမီး နေမကောင်းဘူးလား….” “ မဟုတ်ဘူး….တီတီလေး….ဒီနေ့က ဟောပြောပွဲ ကျူရှင်မှာရှိတယ်….မနက်ဖြန် ကျူရှင် စာမေးပွဲရှိတယ်….အဲဒါ မိုင်မိုင် မသွားတော့ဘဲ…အိမ်မှာပဲ စာကျက်တော့မလို့….” “ အင်း…အင်း…မိုင်မိုင်ဘာသာ ကြည့်လုပ်ပေါ့….နေမကောင်းရင်တော့ တီတီလေးကို ပြောနော်….” “ အင်းပါ….” အိပ်ခန်းတံခါးကို ပြန်စေ့၍ သီတာပြုံး လှည့်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူမထင်လို့ပဲလားမသိ မိုင်မိုင်တစ်ယောက် ခပ်ငေါင် ငေါင်ဖြစ်နေသည်ဟု ထင်မိသည်။ မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ သီတာပြုံး ဆုတောင်းမိလိုက်လေသည်။
သီတာပြုံးမှာ မိုင်မိုင်၏ အိပ်ခန်းရှေ့မှပြန်၍ လှည့်ထွက်လာပြီးနောက် အဝတ်အစားလဲ၍ ရေချိုးလိုက်သည်။ ရေချိုး ပြီး ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်ပြီးသည်အထိ မိုင်မိုင် အသံကို မကြားရတိတ်ဆိတ်၍ နေသည်။ ဒါကြောင့် သီတာပြုံး မိုင်မိုင်၏ အိပ်ခန်း ရှေ့ရောက်လာပြီး အိပ်ခန်းတံခါးကို အသာလေးဟ၍ အထဲသို့ ကြည့်လိုက်သည်။ “ အို…” ကုတင်ပေါ်တွင် မိုင်မိုင်လေး စောစောကဝတ်ထားသော ထဘီလေးက ခါးတွင်မရှိတော့ ဖင်ပြောင်လေးနှင့် ပေါင်နှစ် လုံးထောင်၍ကားထားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ပေါင်ကြားထဲသို့ထည့်ကာ တစ်ဖက်က စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကိုဖြဲပြီး တစ် ဖက်က စောက်စေ့လေးကို ကလိ၍နေသည်။ မိုင်မိုင်၏ မျက်နှာနုနုလေးက နီရဲ၍နေပြီး မျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်ထားကာ မဲ့မဲ့ရှုံ့ရှုံ့ လေးဖြစ်သွားလိုက် လျှာလေးထုတ်၍ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပွတ်လိုက်ဖြင့် ဖြစ်နေသည်။ သီတာပြုံး ဘာလုပ်ရမည်ကို အလျင်အ မြန်စဉ်းစားလိုက်သည်။ ထို့နောက် မိုင်မိုင်၏ အိပ်ခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့်ပြီးအထဲသို့ ဝင်လိုက်သည်။
“ ဟင်…တီတီလေး….” သီတာပြုံးကို တွေ့လိုက်ရသည်နှင့် မိုင်မိုင် တစ်ကိုယ်လုံးတုန်၍ လန့်သွားပြီး ပေါင်လေးထဲမှ လက်တွေကိုထုတ်ကာ ပေါင်နှစ်လုံးကို စေ့ထားလိုက်သည်။ ကုတင်ဘေးတွင်ရပ်၍ သီတာပြုံးက မိုင်မိုင်ကို ကြည့်ရင်း ပြုံးပြလိုက်သည်။ “ ကိုယ့်တီတီလေးပဲ မိုင်မိုင်ရယ်….ဘာလန့်စရာလိုလို့လဲ…မိုင်မိုင် ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တီတီလေးက သိလို့ မိုင်မိုင်ကို ဒီထက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးဖို့ ဝင်လာတာ….” “ ဟို…တီတီလေး…ဟို…ဟို….” “ ဟင်း…ဟင်း….ကဲပါ မိုင်မိုင်ရယ်… သမီးရဲ့အဝတ်အစားတွေ အကုန်လုံးကို ချွတ်လိုက်…ကဲထ….” မိုင်မိုင် မယုံရဲယုံရဲဖြင့် လေးပင်စွာ ထထိုင်ပြီး သူမကိုယ်ပေါ်မှ အင်္ကျီတွေ ဘရာစီယာတွေကို ချွတ်လိုက်သည်။ တင်း ရင်းနေသော မိုင်မိုင်၏ နို့လေးတွေက နုညက်နေရုံမျှမက သီတာပြုံး၏ နို့အုံတွေလောက်ကို ဖွံ့ထွားသည်။
“ ကဲ….လှဲလိုက် မိုင်မိုင်….” မိုင်မိုင် မယုံရဲယုံရဲဖြင့် အိပ်ယာပေါ်သို့ ပြန်၍ လှဲချလိုက်သည်။ သီတာပြုံး ကုတင်ပေါ်သို့ တက်လိုက်ပြီး မိုင်မိုင်ဘေး တွင် လှဲချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ မိုင်မိုင်ကိုယ်လုံးလေးကို တင်းကြပ်စွာဖက်ပြီး မိုင်မိုင်မျက်နှာလေးကို ကမူးရှူးတိုး နမ်းပေး သည်။ ပြီးတော့ မိုင်မိုင်၏ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုပ်နမ်းလိုက်ပြီး သူမ၏လက်က မိုင်မိုင်၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို စုန်ချီဆန်ချီ ပွတ် သပ်၍ပေးသည်။ မိုင်မိုင်တစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်းရှိန်း၍ လေထဲမြောက်တက်နေသလို ခံစားနေရသည်။ အတန်ငယ်ကြာတော့မှ သီတာပြုံးက မိုင်မိုင်၏ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး မိုင်မိုင်၏ ပုခုံးလေးတွေ ရင်ညွန့်သားလေးတွေကို စုပ်နမ်း သည်။
သီတာပြုံး လွှတ်ပေးလိုက်သော မိုင်မိုင်၏ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက ထူအမ်းအမ်းဖြစ်ကာ တမျိုးလေးခံစားနေရသည်။ သီတာပြုံး မိုင်မိုင်၏ နို့အုံလေးတစ်ဖက်ကို ငုံ၍စို့လိုက်ပြီး ကျန်တစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့် ကိုင်လိုက်သည်။ မိုင်မိုင်၏ လက်လေး တွေက သီတာပြုံး၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို သိမ်းကြုံး၍ ဖက်လိုက်သည်။ သီတာပြုံးက မိုင်မိုင်၏ နို့အုံထိပ်ပိုင်းလေးတွေကို အမိအ ရ စုပ်ထားပြီး လျှာဖျားက နို့သီးခေါင်းသေးသေးလေးနှင့်တကွ နို့သီးခေါင်းအောက်ခြေမှ အနီရောင်အဝိုင်းလေးကိုပါ တိုးတိုး ပြီးယက်ပေးသည်။ ထို့ပြင် လက်တစ်ဖြင့် ကိုင်ထားသော နို့အုံလေးကိုလည်း ဖွဖွလေးဆုပ်နယ်ရင်း နို့သီးခေါင်းလေးကို လက် ညှိုးလက်မဖြင့် ညှပ်၍ချေပေးသည်။
“ ဟင်း….ဟင်း…အင်း…ဟင့်….တီတီ….တီတီလေးရယ်….ဟင်း….ဟင်း….” ခဏအတွင်း မိုင်မိုင်မှာ အဖျားတက်သလို တုန်ယင်၍လာသည်။ သီတာပြုံး မိုင်မိုင်၏ နို့အုံလေးတစ်ဖက်ပေါ်မှ လက် ကိုဖယ်လိုက်ပြီး မိုင်မိုင်၏ ဝမ်းပြင်းသားလေးများ ဆီးခုံနှင့် အမွှေးပါးပါးလေးတွေပေါက်နေသော စောက်ပတ်အုံလေးတို့ကို ပွတ်ပေးသည်။ မိုင်မိုင် တဟင်းဟင်းနှင့် ညည်းရင်း ခံရခက်ပုံဖြင့် သူမ၏ ပေါင်လေးမြှောက်လိုက်ချလိုက်၊ စုလိုက်ခွာလိုက် ဖြစ်နေသည်။ သီတာပြုံးက နို့နှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် မပြတ်အောင် စို့ပေးရင်း လက်တစ်ဖက်က မိုင်မိုင်၏ စောက်ပတ်အုံ လေးကို ပွတ်ပေးနေရာမှ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို ပွတ်ပေးရင်း စောက်စေ့လေးကို လက်မထိပ်လေးဖြင့် တို့ထိကလိ ပေးလိုက်သည်။
“ အဟင်း…ကျွတ်…ကျွတ်….အင့်….ဟင်း….ဟင်း….” မိုင်မိုင်၏ မျက်လုံးအစုံမှိတ်ထားသော မျက်နှာလေးမှာ ရှုံ့မဲ့၍နေသည်။ ပြီးတော့နေရထိုင်ရတာ အတော်ခက်လာ သဖြင့် ဒူးနှစ်ဖက်ကို ဆွဲထောင်ပြီး ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားလိုက်မိသည်။ ဒီမှာတင် သီတာပြုံး၏ လက်ခလယ်က မိုင်မိုင်၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ညင်သာစွာ တိုးဝင်လာသည်။ “ အို….အိုး….အင်း….အင်း….” မိုင်မိုင် ခါးလေးကော့တက်သွားသည်။ စောက်ခေါင်းထဲတွင် အရည်တွေက အတော်လေးရွှဲနစ်နေပြီ။ သီတာပြုံး နို့သီး လေးတွေကို ခပ်ပြင်းပြင်းစို့ပေးရင်း မိုင်မိုင်၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ လက်ခလယ်ကို သွင်းချီထုတ်ချီလုပ်ပေးသည်။
လက်မက လည်း စောက်စေ့လေးကို ပွတ်သပ်ပေးသည်။ မိုင်မိုင် အရည်တွေ မတရားကြီး ထွက်လာချေပြီ။ “ ဗြစ်… ဗြစ်….ပြွတ်….ပလွတ်….အိုး….အင်း….ဟင်း….အင်း….အိုး….အိုး….” မိုင်မိုင်၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ သီတာပြုံး၏ ထုတ်ချီသွင်းချီလုပ်ပေးနေသော လက်ခလယ်လက်ချောင်းကို ဆွဲဆွဲပြီးစုပ် နေသည်။ သီတာပြုံး မိုင်မိုင်၏ နို့လေးကို ခပ်ပြင်းပြင်းစုပ်၍စို့ရင်း စောက်ခေါင်းထဲမှ သူမ၏ လက်ခလယ်လက်ချောင်းကို သွက်သွက်ကြီး အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးလိုက်သည်။
“ အား…အင်း….အင်း….အား….အား….” မိုင်မိုင်၏ တင်ပါးလေးတွေ ဆက်ကနဲ မြောက်ကြွသွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးတောင့်သွားရာမှ တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲဖြစ်ကာ ငြိမ်ကျသွားသည်။ စောက်ခေါင်းထဲမှ လက်ခလယ်ကို ခဏကြာသည်အထိ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် ဖြေးဖြေးချင်းလုပ်ပေးပြီး တော့မှ လက်ခလယ်ကို စောက်ခေါင်းထဲမှဆွဲ၍ ထုတ်လိုက်သည်။ မိုင်မိုင် မျက်လုံးလေးတွေကိုဖွင့်၍ သီတာပြုံးအား ကျေးဇူး တင်သော အကြည့်ဖြင့်ကြည့်သည်။ “ မိုင်မိုင်…ကောင်းတယ် မဟုတ်လား….” “ အာ…တီတီလေး ကလဲ….” “ နောက်ဆို မိုင်မိုင် ကောင်းအောင် တီတီလေး အမြဲလုပ်ပေးမယ်…ဘယ်ယောက်ျားကိုမှ စိတ်မဝင်စားရဘူးနော်… အန္တရာယ်များတယ် သိလား….”
“ သိပါတယ်….တီတီလေး ကလဲ….” သီတာပြုံး ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်မိသည်။ နောက်နေ့များတွင် သီတာပြုံးက မိုင်မိုင်အား နေ့တိုင်း နူးနှပ်၍ ပလူးပေး သည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့အရောက်တွင်တော့ ယောက်ျားနှင့်မတွေ့တာ သုံးရက်ရှိသွားပြီဖြစ်သော သီတာပြုံးက မိုင်မိုင် အား သူမလုပ်ပေးသလို လုပ်စေ၍ အာသာဖြေခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ တစ်ပတ်အကြာ ဧရာ အိမ်သို့ပြန်လာသည့်နေ့ အထိ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်တလဲ ပလူးနေခဲ့ကြလေသည်။
တစ်ပတ်လုံးလုံး အလုပ်ထဲတွင်နေခဲ့ပြီး နားရက်တွင် အိမ်သို့ပြန်ရောက်လျှင် အိမ်ပေါက်ဝ၌ မိန်းမဖြစ်သူကို တွေ့ လိုက်ရသည်နှင့် ဧရာ၏ လီးက တောင်လာတော့သည်။ ဒီတစ်ပတ်နားရက် အိမ်သို့ ဧရာပြန်ရောက်လာတော့ မိုင်မိုင်တစ် ယောက် အချိုးတစ်မျိုးပြောင်းနေတာကို ဧရာ သတိထားမိသည်။ မနက်ပိုင်း ဧရာ အိမ်သို့ရောက်ရောက်ခြင်း မိုင်မိုင်က သူမ၏ အိပ်ခန်းထဲမှနေ၍ “ တီတီလေးနော်….ဒီည မိုင်မိုင်နဲ့ လာအိပ်ရမှာ….” ဟု အော်ပြောသံ ကြားလိုက်ရသည်။ ဧရာရော သီတာပြုံးပါ မျက်နှာကွက်ကနဲ ပျက်သွားကြသည်။ ခဏနေမှ သီတာပြုံးက “ အရင်လိုပဲ (၁၂) နာရီထိုးရင် ကိုက သီတာကို လာနှိုးပေါ့…” ဟု ဧရာ၏ နားသို့ကပ်၍ တီးတိုးပြောသည်။
နေ့လည်ဖက်ကျတော့လည်း ကြည့်အုံး…။ ဧရာတစ်ယောက် မိုင်မိုင်၏ အိပ်ခန်းရှေ့မှ ဖြတ်၍အသွား အိပ်ခန်းထဲမှ မိုင်မိုင်နှင့် ပက်ပင်းတိုးခိုက် မိုင်မိုင်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ရင်လျားထားသော ထဘီ က သူ့အလိုအလျှောက်ပဲ ကျွတ်သွားသလား ဒါမှမဟုတ် မိုင်မိုင်ကပဲ ဖြုတ်ချလိုက်သလား ဧရာ မတွေ့လိုက်။ ဧရာ တွေ့လိုက် ရတာကတော့ ထဘီစတစ်ဖက်ကို လက်မှဆွဲထားသော မိုင်မိုင်၏ ကိုယ်လုံးတီး အလှပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ မိုင်မိုင်က “ ကန် တော့…ကန်တော့…” ဟုပြောပြီး အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်သွားသည်။
“ ဟင်…” အိပ်ခန်းဝတွင် ဘွားကနဲ မိုင်မိုင်ကို ဧရာ မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့လိုက်ရသည်။ ခပ်တွေတွေလေးရပ်နေသော မိုင်မိုင်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ပုခုံးကြိုးသိုင်းပေါင်လည်လောက်သာရှိသော ဂါဝန်ပါးပါးလေးတစ်ထည်သာရှိသည်။ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာ သော အလင်းရောင်ဖြင့် မိုင်မိုင်၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ်အသွယ်သွယ်ကို အတိုင်းသားမြင်နေရသည်။ ဧရာ မက်မောစွာ ဖြင့် ကြည့်နေလိုက်မိသည်။ ခဏတာ ခေါင်းလေးငုံ့နေရာမှ မိုင်မိုင်၏ မျက်နှာလေးက မော့၍လာသည်။ မိုင်မိုင် ဧရာကို လုံးဝ မကြည့် အခန်းဝတွင် ရပ်နေသော ဧရာကိုကျော်၍ အိပ်ခန်းထဲတွင်ရှိနေသော ဧရာနှင့် သီတာပြုံးတို့ အိပ်သည့် နှစ်ယောက် အိပ်ကုတင်ကြီးပေါ်မှ ထူထဲလှသော နှစ်ယောက်အိပ်မွေ့ယာကြီးကို လှမ်း၍ကြည့်သည်။
ဧရာ ဘေးသို့ကပ်၍ လမ်းဖယ်ပေး လိုက်တော့ မိုင်မိုင်က စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို ကုတင်ကြီးဆီသို့ ဦးတည်ရှေ့ရှု၍ အခန်းထဲသို့ တစ်လှမ်းချင်းဝင်၍လာသည်။ သူ့ အရှေ့မှ ဖြတ်သွားစဉ် မွှေးပျံ့သောရနံ့တွေက ဧရာတစ်ကိုယ်လုံးကို လွှမ်းခြုံ၍သွားသည်။ ဧရာ၏ အသိစိတ်တွေ ကင်းမှန်းမ သိ ကင်းမဲ့၍လာသည်။ ဖွင့်လိုက်မိသော အိပ်ခန်းတံခါးကို အသာပြန်စေ့၍ ခါးမှပုဆိုးကို ချွတ်ချပြီး မိုင်မိုင်၏ နောက်မှ လိုက် လာခဲ့မိသည်။ ဧရာ၏ ရှေ့မှ ထောင်မတ်နေသော လီးချောင်းကြီးက ရှေ့မှ မိုင်မိုင်ကို ထိုးရန်ချိန်ရွယ်ထားသော လှံတံသဖွယ် ဖြစ်နေသည်။
ကုတင်ကြီးဘေးရောက်တော့ မိုင်မိုင်က ဧရာကို ကျောပေးထားလျက်မှ သူမ၏ ပုခုံးပေါ်မှ ဂါဝန်သိုင်းကြိုးလေး တွေကို ဖြည်ချလိုက်သည်။ ဂါဝန်လေးက လျောကနဲ ကျသွားရင်း ခြေဖျားတွင်ပုံသွားသည်။ မိုင်မိုင်က ခါးတစ်ဆစ်ချိုးကုန်း၍ သူမ၏ ခြေဖျားတွင် ပုံကျနေသော ဂါဝန်လေးကို ငုံ့၍အဖယ်… လုံးတစ်ကားစွင့်သွားသော ဖွေးနုသည့် တင်သားအစုံကြားမှ နောက်သို့ပြူးထွက်နေသော စောက်ပတ်လေးက နီကျင့်ကျင့်အမွှေးလေးများခြံရံလျက် အိပ်ခန်းထဲမှ မီးရောင်အောက်တွင် ရွှမ်းစိုတောက်ပ၍နေသည်။ စောစောကတည်းက မိုင်မိုင် အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်နေကြောင်း သိသာလှသည်။ ဧရာ ဘာကိုမှ မစဉ်းစားမိတော့ သူ့ကိုကာမဆန္ဒတွေက အနိုင်ယူသွားပြီ။
ရှေ့မှ ဂါဝန်ကို ငုံ့ကောက်နေသော မိုင်မိုင်၏ ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော လီးထိပ်ကြီးကို မိုင်မိုင်၏ နောက်သို့ပြူးထွက်နေသော စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားလေး နှစ်ခုကြားသို့တေ့ကာ တရှိန်တိုး ဆောင့်သွင်းလိုက်တော့သည်။ “ ဗြစ်….ဗြစ်….အ….အီး…..အား…..” စောက်ခေါင်းထဲတွင် ထွက်နေသော အရည်များနှင့် ဧရာ၏ ဆောင့်အားကြောင့် လီးတစ်ချောင်းလုံး စောက်ခေါင်းထဲ သို့ ဝင်သွားသည်။ မိုင်မိုင်မှာ ဗြုံးကနဲ ကုတင်ဘောင်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး တင်း၍ခံသည်။ အသံမထွက်မိအောင် နှုတ် ခမ်းကို ပြတ်ထွက်လုမတတ်ကိုက်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးအသားလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။
မချိမဆန့် နာကျင်နေ သော်လည်း သူမ၏ တစ်ချိန်လုံးထကြွနေသော အာသာဆန္ဒကတော့ ကျေနပ်သယောင် ဖြစ်သွားသည်။ ဧရာ မထိန်းနိုင် သောစိတ်ကြောင့် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆယ်ချက်လောက်ဆောင့်ပြီးတော့မှ သတိရသွားသည်။ “ မိုင်မိုင်….သိပ်နာသွားလားဟင်….” “ ဟို…ကိုကို ကောင်းရင်ပြီးတာပါပဲ…” ဟု ပြောရင်း မိုင်မိုင်က ဖင်လေးကို ပို၍ကုန်းပေးသည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged စစေ့တှေ့ေး ရေးရေးပျေါ